09/24/13 ~ Myanmar Forward
ဟုန်ရှင်း အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်များကို ဆက်လက်တရားစွဲဆို
Posted by drmyochit Tuesday, September 24, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မြို့တော်ခန်းမရှေ့ သပိတ်စခန်းဖွင့် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ ဟုန်ရှင်းအအေးခန်း အလုပ်သမားတွေနဲ့ အလုပ်ရှင်တို့ အကြား လစာ လျော်ကြေးကိစ္စတွေ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြေလည်သွားပေမယ့် ဟုန်ရှင်းအခြေခံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုမင်းမင်းနဲ့ အတွင်းရေးမှူး ကိုသီဟတို့ကို အလုပ်ရှင်က ဆက်လက်တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။
ပိတ်ဆို့မှု၊ အကျိုးဖျက်ဆီးမှု၊ အားပေးအားမြှောက်ပြုမှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု စတဲ့ ပုဒ်မ ၃၄၁၊ ၄၂၇၊ ၁၁၄၊ ၅၀၆ တွေနဲ့ တရားစွဲဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားစွဲခံထားရတဲ့ ကိုမင်းမင်းက “အလုပ်ရှင်ဘက်ကတော့ ကျနော်တို့ နစ်နာတဲ့အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်ခင်ဗျ။ ကျနော်တို့ကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုကတော့ မပိတ်ပေးသေးဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
ဟုန်ရှင်းအလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်ဟာ အလုပ်ရှင်က လျော်ကြေးပေးပြီး အလုပ်ထုတ်ဖို့ စီစဉ်နေတာကို ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့ ကတည်းက ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ သပိတ် စခန်းဖွင့်လှစ် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။
ဒီအတွက် အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ်တွေက အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားတွေအကြား ညှိနှိုင်းပေးရာကနေ အလုပ်ရှင်ဘက်က အလုပ်သမားတွေအတွက် လုပ်အားခ လျော်ကြေးပေးဖို့ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက သဘောတူညီခဲ့တာပါ။
အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားတွေအကြား ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းကတော့ ညှိနှိုင်းပေးတာကို အလုပ်သမားတွေက ကျေနပ်မှုရှိကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ဥပဒေမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲပါတယ်။ နောက်တခုက ကျမ တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ အလုပ်သမား ဦးစီးဌာနက ဦးစီးမှူးတွေကိုယ်တိုင်လည်း ညှိနှိုင်းပေးတဲ့ဟာမှာကြီးကြပ်ထားပါတယ်။ ညှိနှိုင်းပေးမှုမှာ အလုပ်သမားတွေ ခွင့်ခံစားခွင့်တွေကိုလည်း ထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။”
သဘောတူညီချက်အရ လုပ်သက် ၃ နှစ်အထက် ရှိသူတွေကတော့ လစာ၊ ရက်မှန်ကြေး၊ ထမင်းစာရိတ် စတာတွေ အပါအ၀င် ၅ လစာ လျော်ကြေး ပေးခဲ့သလို လုပ်သက် ၃ နှစ်အောက်ရှိတဲ့သူတွေကိုတော့ ၃ လစာ လျော်ကြေး ပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လျော်ကြေးရရှိခဲ့တဲ့အပေါ် ကိုမင်းမင်းက “ကျနော်တို့ အလုပ်သမားတွေက လျော်ကြေးလိုချင်လို့ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ အလုပ်လုပ်ချင်လို့ လာကြတာ။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်မနေ လုံးဝညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့ အခြေအနေအဆုံးမှာ လျော်ကြေးယူပြီး ပြန်ခဲ့ရတာပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူတွေက ညနေ ၃ နာရီမှာ လုပ်သက်ခံစာခွင့်လျော်ကြေးပေးဖို့ ကတိပေးသွားတဲ့ အတွက် အလုပ်သမားတွေက လုပ်သက်ခံစားခွင့်အတွက် လျော်ကြေးရဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
21.9.2013 ရက်စွဲဖြင့် တင်ခဲ့သော “မိတ္ထီလာမှာ ကုလား (၆) ယောက်နှင့်အတူ ဖမ်းမိသော ဗမာမိန်းကလေး ဆေးမိသလိုဖြစ်နေ” သတင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ
Posted by drmyochit Tuesday, September 24, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
21.9.2013 ရက်စွဲဖြင့် တင်ခဲ့သော “မိတ္ထီလာမှာ ကုလား (၆) ယောက်နှင့်အတူ ဖမ်းမိသော ဗမာမိန်းကလေး ဆေးမိသလိုဖြစ်နေ” သတင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။
ဝမ်းတွင်းမြို့၊ သဲတော၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်နေ ဦးညွန့်ဝင်း+ဒေါ်တင်မြတို့၏သမီး မအေးမြသူ အသက် (၂၁) နှစ်၊ E-မေဂျာ ဖြင့် ဘွဲ့ယူမည့်သူ ပျောက်သွားတာ (12.9.2013) ရက်နေ့ကပါ။
မအေးမြသူကို ကိုစိုးထက်အောင် (၂၆) နှစ် ကလေးနှစ်ယောက်အဖေ တစ်ခုလတ်က မူဆယ်မြို့မှ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ယောင်ဆောင်ပြီး ချဉ်းကပ်ပါတယ်။ ကိုစိုးထက်အောင်က ဆိတ်အရောင်းအဝယ်နဲ့ ခရီးအမြဲထွက်နေလို့ ဝမ်းတွင်းကမှန်း ကောင်မလေးက မသိရှိပါဘူး။ မူဆယ်ကပဲ ထင်နေတာပါ။ မအေးမြသူက ကုလားရုပ်ပေါက် နေတဲ့ ကိုစိုးထက်အောင်ကို ကြောက်လန့်ပြီး လက်မခံပါဘူး။ ဒါကို သူ့ဓာတ်ပုံအတင်းထိုးပေးထားခဲ့တာပါ။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ဖုန်းခဏခဏဆက်ပါတယ်။ ကောင်မလေးက ဖုန်းမကိုင်ပါဘူး။ အပြင်လည်း မထွက်တော့ ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ သဲတောမှ ဝမ်းတွင်းသို့ ကွန်ပျူတာသင်တန်းလာတက်တာကို ကိုစိုးထက်အောင်က ခြေရာခံမိ သွားတာပါ။
12.9.2013 ရက်နေ့ မွန်းလွဲ 1:00 နာရီခန့်မှာ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းကအပြန် ကိုစိုးထက်အောင်က စကား နည်းနည်းပြောချင်လို့ ဆိုလာပါတယ်။ ဒါဆို ဒီနားပြောဟု ကောင်မလေးကပြောတဲ့အခါ တစ်ခွန်းနှစ် ခွန်းထဲပါ ပြောပြီး ဆိုင်ကယ်ပေါ် ဆွဲတင်ခေါ်သွားပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်က IPSUM အမျိုးစားဖြစ်ပြီး ဘယ်ခေါ်သွားမှန်းမသိရလို့ ကောင်မလေးက ခုန်ချမယ် ပြောပါ တယ်။ ဒါကို ခုန်ချလို့မရအောင် အမြန်မောင်းပြေးတာပါ။ ဆိုင်ကယ်က အမြင့်ကြီးလည်းဖြစ် အမောင်း ကလည်းကြမ်းလို့ ခုန်မချရဲပါဘူး။
12.9.2013 ညမှာ တောင်သာ ဇဂျမ်းရွာရောက်တော့ ဖောက်ပြီးသားအဖျော်ရည်ဗူး ပေးတိုက်ပါတယ်။ ကောင်မလေး က မသောက်တော့ ပါးစပ်ဖြဲပြီး အတင်းတိုက်ပါတယ်။ သူတို့ တည်းတဲ့အိမ်က အဖိုးအဖွားနှစ်ယောက် တည်းရှိပြီး တစ်အိမ်နှင့်တစ်အိမ် အလှမ်းဝေးတယ်ဆိုပါတယ်။ 13.9.2013 ရက်နေ့ မှာ ကောင်မလေး ကို တစ်ယောက်ထဲထားပြီး စိုးထက်အောင် ထွက်သွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကောင် မလေးက အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ချင်ပေမယ့် ဖုန်းကို စိုးထက်အောင်က သိမ်းသွားလို့ မဆက်နိုင်ပါဘူး။ ထွက်ပြေး ဖို့ကြံတော့ လည်း စိုးထက်အောင်ရဲ့ လူတွေချည်းဖြစ်နေလို့ မိမယ်ဆိုတာ သိနေပါတယ်။
ညနေမှာ စိုးထက်အောင် စာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့ ပြန်လာပါတယ်။
“ဘာသာမတူတဲ့အတွက် ပြဿနာတွေ ဖြစ်မှာ လက်မှတ်မထိုးရင် ငါထောင်ကျမှာ ငါ့ဘက်မှာ အမြဲရပ်တည်ရမယ်” လို့ပြောပြီး ရွာလူကြီးဆီ ခေါ်သွားပါတယ်။
စိုးထက်အောင်ဟာ ဆိတ်ဝယ်နေကျဖြစ်လို့ ရွာလူကြီးအပေါ်လည်း သြဇာညောင်းပါတယ်။
ကောင်မလေးဟာ အခြိမ်းခြောက်ခံထားရလို့ ကြောက်လန့်နေပြီး သွေးလန့်နေပါတယ်။ ဒါကို အခွင့်အရေးယူပြီး စိုးထက်အောင်က ကောင်မလေးကို ဆေးခန်းလိုက်ပို့ပါတယ်။ သူနာပြုဆရာမက စိုးထက်အောင် နင်ဆေးထိုးမှာလား မေးပါတယ်။ စိုးထက်အောင်က အေးမြသူ နင်သွားထိုးချေ ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ကောင်မလေးက ဆရာမကို ဘာဆေးထိုးမှာလည်း ခဏခဏမေးပါတယ်။ ဆရာမက ဘာမျှပြန်မဖြေဘဲ ဆေးထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။
ည မိုးချုပ်ကြီးမှာ ဆိုင်ကယ်နှင့်တင်ပြီး ခေါ်လာပါတယ်။ မိုးရွာထဲမှာ ကောင်မလေးကို တွန်းချပါတယ်။ ကောင်မလေးက စိုးထက်အောင် မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ဖုန်းနဲ့ သူမသူငယ်ချင်း မဝေဇင်အောင်ဆီ ဖုန်းဆက်အကြောင်း ကြားတာ သိသွားလို့ နှိပ်စက်တာပါ။ နင်ဖုန်းဆက်လို့ ငါတို့နေရာသိသွားတာပြောပြီး ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာပါ။
မဝေဇင်အောင်ဆီ ဆက်သွယ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဝမ်းတွင်းမြို့မှ ကိုမောင်ဦးက စိုးထက်အောင်ဆီ ဖုန်းဆက်မေးပါတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူ ဒေါ်ချစ်ချစ်အောင်ကလည်း ဖုန်းဆက်မေးပါတယ်။ သူ့လက်ထဲမှာ ကောင်မလေးမရှိဘူး။ သူနဲ့ပြေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ ဘူးခံနေပါတယ်။
စိုးထက်အောင်ရဲ့ မိဘတွေဆီ သွားပြောတော့လည်း ငြင်းလွှတ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ရဲစခန်းမှာ လူပျောက်တိုင်ထားပါတယ်။
ကောင်မလေးရဲ့ အဒေါ် ဒေါ်ချစ်ချစ်အောင်က ဖုန်းဆက်တိုင်း စိုးထက်အောင်နဲ့ပဲ တွေ့ရပြီး မဟုတ်ဘူး မရှိဘူး ဘဲ ငြင်းနေပါတယ်။ ငြင်းလို့မရအောင် ပြောတဲ့အခါကျတော့လည်း အေးမြသူက စကားမပြောချင်လို့တဲ့ ဆိုကာ ဖုန်းချချသွားပါတယ်။ ဒေါ်ချစ်ချစ်အောင်က ဆယ်ငါးမီးနစ်တစ်ခါ နာရီဝက်တစ်ခါ အမြဲဖုန်းဆက်ပြီး မေးနေ တာပါ။
17.9.2013 မွန်းလွဲ 2:00 နာရီ ခန့်မှာ ဖုန်းထပ်ဆက်တော့ ကောင်မလေးနဲ့ သူနဲ့ တစ်နေရာဆီမှာဖြစ်နေလို့ 4:30 နာရီမှ ရောက်မှာ 4:30 နာရီမှ ပြန်ဆက်မယ်ပြောပေမယ့် ပြန်မဆက်လို့ ဒေါ်ချစ်ချစ်အောင်ကပဲ ထပ်ဆက်ရပါတယ်။ ဆက်တော့လည်း ဆိတ်တင်တဲ့ကားက ဗွတ်နစ်နေလို့ ညကျမှ ပြန်ဆက်မယ်။ ထပ်ပြောပါတယ်။ အခုဘယ်နေရာရောက်နေလဲမေးတော့ ပုပ္ပါးရောက်နေတယ် ဖြေပါတယ်။ အရင်က ပခုက္ကူ ရောက်နေတယ် မန္တလေးရောက်နေတယ်လို့ လှည့်ဖြေခဲ့တာပါ။
ဒေါ်ချစ်ချစ်အောင်က ည 7:00 နာရီမှာ ထပ်ဆက်ပါတယ်။
လာရှိုးကနေ ပြန်လာရမှာ နောက်ကျမယ်ပြောပါတယ်။ ဒါဆို ည 11:00 နာရီနောက်ပိုင်း မလာခဲ့နဲ့ တာဝန်မယူနိုင်ဘူး။ နောက်ကျရင် မနက်မှလာခဲ့ လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီည 17.9.2013 11:05 နာရီမှာ အဖမ်းခံရတဲ့သတင်း ရောက်လာပါတယ်။ စိုးထက်အောင်နှင့် အခြားကုလားငါးယောက်က ကောင်မလေးကို ကားနဲ့တင်ခေါ်လာတာပါ။ မိတ္ထီလာ ပထမဂိတ်မှာ ကောင်မလေးကို ဝှက်ထားကြလို့ လွတ်သွားပါတယ်။ ဒုတိယဂိတ်ရောက်တော့ မသင်ကာတာနဲ့ တံခါးဖွင့် ရှာကြည့်မှ ကောင်မလေးကို တွေ့ရတာပါ။ ကုလားခြောက်ယောက်ကို အမှတ် (၂) စခန်းမှာ (ပ) ၆၇/၂၀၁၃ နှင့် ချုပ်ထားပြီး ကောင်မလေးကို ဒုရဲအုပ်ကတော်နှင့်အတူ သိပ်ထားပါတယ်။
18.9.2013 ရောက်တော့ မိသားစု လိုက်လာပါတယ်။ စခန်းမှူးအိမ်မှာ တွေ့ခွင့်ရပါတယ်။
ဆေးမိထားသလို ခပ်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေလို့ မေးမြန်းလို့ မရခဲ့ပါဘူး 21.9.2013 ရောက်မှ သ တိပြန်ကောင်း လာတာပါ။ ကောင်မလေးက ဆိုင်ကယ်ပေါ်ဆွဲတင်ခေါ်သွား တာအစ ဆေးထိုးခံရတာတွေပါ အကုန်ဖွင့်ပြောလာပါတယ်။ သားမယားအဖြစ်လဲ သုံးကြိမ်တောင် အကျင့် ခံခဲ့ရပါတယ် တဲ့။
အဖမ်းမခံရမီက မင်းမင်း ဆိုတဲ့ကုလားက ဖုန်းဆက်ပြောပါတယ်။ သာကော ဆိုသူဆီကိုပါ။ (သာကော=တရုတ် စကား=အကိုကြီး) မင်းမင်းက သာကောကို အခြေအနေမေးတော့ ကားက ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာတွေ ပြောနေတာ ကောင်မလေးက ကြားနေရပါတယ်။ သာကောနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှ ကားနဲ့ထွက်လာကြတာပါ။ ဘယ်နေရာရောက်နေလဲမေးတိုင်း ကုလားတွေက မသိဘူးပဲ ဖြေကြပါတယ်တဲ့။
မနက်ဖြန် 24.9.2013 ရက်နေ့ဆို သူတို့အားလုံး လွတ်ပါပြီ။ မိဘတွေက ရဲကိုတိုင်ထားပေမယ့် ကောင်မလေးရဲ့ ထွက်ချက်က ပဓာနဖြစ်လို့ ဝမ်းတွင်းရဲစခန်းက ကောင်မလေးကို သွားထုတ်မှာပါ။ မိတ္ထီလာခရိုင်မှူးကလည်း ကုလားခြောက်ယောက်ကို ဝမ်းတွင်းထိ လိုက်ပို့ပြီး စစ်ဆေးမှာပါ။
ကောင်မလေး သတိမကောင်းခင်မှာ ကောင်မလေးကပဲ ခိုးရာလိုက်ပြေးသလို မိဘတွေကပဲ ကောင်မလေး ကုလားနဲ့ ဖြစ်နေတာ သိသလို ကုလားက ကောင်မလေးအိမ် အဝင်အထွက်ရှိသလို အပြစ်ဖို့ ပြောဆို နေကြတာကို မိဘတွေက မကျေနပ်ကြပါဘူး။
ကုလားက ကလေးအဖေဆိုတာရော ဝမ်းတွင်းမှာနေတာကိုပါ ကောင်မလေးက လုံးဝမသိတာပါ။
မူဆယ်ကပြောလို့ မူဆယ်ကပဲထင်နေပြီး ဗမာ/ဗုဒ္ဓပြောပေမယ့် မဲမဲသဲသဲဖြစ်နေလို့ ကုလားမှန်းသိပြီး အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲ ရှောင်နေ ပုန်းနေခဲ့တာပါ။
ဒီအကြောင်းကို အဒေါ်ဖြစ်သူ ဒေါ်ချစ်ချစ်အောင် 09-423689562 က ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ် ပြောပြမည့် အကြောင်းနှင့် နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် တင်ထွန်းအောင် 09-402609169 ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်း နိုင်ကြောင်းပါ။
Credit: Nay Min
Posted by drmyochit Tuesday, September 24, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
မကြာသေးမီကမှ ပူပူနွေးနွေး သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် ယီမင်နိုင်ငံက အသက်ရှစ်နှစ်သမီးလေးသည် သူ့ထက် အသက်ငါးဆကြီးသည့်သူ တစ်ဦးနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြား ခဲ့ရပြီး ထိုညတွင်ပင် မအင်္ဂါ စုတ်ပြတ်ပေါက်ပြဲကာ သွေးထွက်လွန်ခြင်းဖြင့် ဘဝနိဂုံး ချုပ်သွားခဲ့ရရှာသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခံစာတွင် ယီမင်နိုင်ငံအတွင်း အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်မီ လက်ထပ်နေရသူပေါင်း နိုင် ငံနေ အမျိုးသမီးထု၏ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အမျိုးသမီးတို့ဘဝ လူမှန်းမသိစ အရွယ် ကတည်း က ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့် ခံနေရမှုများ ကမ္ဘာတွင်ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ကလေး သူငယ် ဆိုင်ရာ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သော ပြဿနာပေါင်းများစွာ ရှိနိုင် ပါသည်။
ကျန်းမာရေးရှုထောင့်က ကြည့်လျှင်လည်း မကောင်း၊ အရွယ်နှင့်မလိုက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထား ရခြင်းက လည်းမကောင်း။ သက်တူရွယ်တူ ကလေးတွေ ကျောင်းသွားနေချိန်တွင် ကိုယ်ဝန်ကြီး တကားကားနှင့် ရိုးသား အပြစ် ကင်းစင်သော မျက်လုံးဝိုင်းလေး များဖြင့် ကြည့်နေသည့်
သနား စရာကလေးငယ် များကို ကိုယ်ချင်းစာကြည့်စေချင်သည်။
ပိုဆိုးသည်က အကြမ်းဖက်ခံရခြင်း၊ ခွဲခြားကာ လူလိုသူလို ဆက်ဆံမှု မခံရခြင်းများ ကြောင့် မိန်းကလေး တို့ဘဝ ပိုပြီးနစ်နာလှသည်။
လမ်းပေါ်တွင် ပြေးလွှားဆော့ကစား နေရမည့်အချိန်တွင် မိဘများကိုယ်တိုင်က လက်ထပ်ရန် အတင်းအဓမ္မ တိုက်တွန်းခြင်း ခံနေရသူပေါင်း များစွာရှိသည်။ အရွယ်မတိုင်ခင် လူကြီးဇာတ်သွင်း ခံလိုက်ရသဖြင့် နားမ လည်နိုင်သော လောကတစ်ခုထဲတွင် အိမ်ထောင်သားမွေး ဘဝဖြင့် နစ်မွန်းကုန် ကြရသည်။
သူတို့ဘဝအာမခံချက်ကို မည်သူမျှမပေးခဲ့။ အမျိုးသမီးအဖြစ် မွေးဖွား လာရခြင်းကပင် ကံဆိုးမိုးမှောင် ကျခဲ့ရသ လို ဖြစ်နေသည်။
ကွယ်လွန်သွားရှာသည့် ၈ နှစ်သမီးလေးအမည်က ရာဝမ်ဖြစ်သည်။ ဟာရတ် နယ်ရှိ ယီမင်နီမြို့ မြောက် ပိုင်း မှ ဖြစ်သည်။ အသက် ၄၀ အရွယ်သတို့သားသည် ကလေး ငယ်သေဆုံးမှုတွင် တာဝန်ရှိသော သူ ဖြစ်သော် လည်း သူ့ကို လူသတ်မှုဖြင့် အရေးယူခြင်း မရှိသကဲ့ သို့ မည်သည့်ပြစ်မှု နှင့်မျှလည်း အရေး ယူခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယီမင်နိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီး ဖြစ်သူ ဟူးရီးယား မာ့ရ်ှဝါက အလွန်အမင်း ဒေါသထွက်ပြီး "ဒီလောက်ဆိုရင် တော်လောက်ပြီထင်တယ်" ဟု စနစ်ကို ထောက်ပြဝေဖန်သွား ခဲ့သည်။
"ယီမင်မှာ ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာ ပထမဆုံးလည်း မဟုတ်တော့ဘူး။ နှစ်တိုင်းလိုလို အလားတူ အဖြစ်မျိုးတွေ ဖြစ်နေ တာပဲ။ ဒီအလေ့အထကြီး အဆုံးသတ်သင့်ပြီ ထင်တယ်" ဟု ၄င်းက CNN သတင်းဌာန သို့ ပြောကြား သွားသည်။
မာ့ရ်ှဝါက AFP သို့ပြောကြားရာတွင်လည်း သူမအနေဖြင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ကတည်းက ပါလီမန်သို့ ထိမ်းမြား လက်ထပ်ခွင့်ကို အသက် ၁၈ နှစ်အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းပေးရေး ဥပဒေကြမ်းကို တင်ပြနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပုံကို ပြန်ပြောင်း ပြောပြသည်။
ယခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ရှစ်နှစ်သမီးလေး သေဆုံးရသည်ဆိုမှု ကိုလည်း အဖွဲ့ဖွဲ့ကာ စစ်ဆေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်း မည်ဟု သူမက ကတိပေးခဲ့သည်။ သူမကမူ အစိုးရအနေဖြင့် သတင်းမထုတ်ပြန်ခင် ကတည်းက ရာဝမ် သေဆုံး ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ယီမင်နိုင်ငံတွင် ချမ်းသာသည့်သူ များက ဆင်းရဲသည့်ကလေးများကို တော်ကောက်သလို ခြေတော် တင်နေခြင်း မှာ အစဉ်အလာဓလေ့ တစ်ခုလိုဖြစ်နေသည်။
ရာဝမ်သေဆုံးရမှု နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေသအတွင်းရှိ ရဲများက သူမ၏ဖခင်ကို ရဲစခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်ပြီး ဤအဖြစ် ကို မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံပြောခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခိုင်းသည်။
ထို့အပြင် မိန်းကလေး တစ်ယောက် ခေါ်လာပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ကို တွဲကာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်သွားကြသေး သည်။ ရဲတွေက ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး အစစ်အမှန်ကို ဖော်ထုတ်ရဲသည့် သတ္တိမရှိကြောင်း ယီမင်နိုင်ငံ ကလေး သူငယ် ဆိုင်ရာ ရှေ့နေ အာမက်အယ်လ်ကွာရပ်ရှ် ကဆိုသည်။
"အစိုးရက ရာဝမ်သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေဆဲ ဆိုတာကို သက်သေထူဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ ရာဝမ်ရဲ့ သူငယ်ချင်း အပေါင်း အသင်း တွေကတော့ ရာဝမ်ကို တိတ်တဆိတ်မြေမြှုပ် လိုက်ပြီလို့ ပြောနေတယ်။
အစိုးရက အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကို ကျွန်တော်တို့ သွားကြည့်ဖို့ ကိုလည်း တားမြစ်ထားတယ်။ ဒါကြောင့် ရာဝမ် ဘယ် လိုဖြစ်ေ နသလဲ ဆိုတာ အစိုးရကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပြီး မဖော်ထုတ်ရင်ရနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး" ဟု အာမက်ကဆိုသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ယီမင် ပါလီမန်က အမျိုးသမီးများလက်ထပ်ရမည့် အနည်းဆုံး ပျမ်းမျှအသက်မှာ ၁၇ နှစ်ဖြစ်သည်ဟု ဥပဒေကြမ်း တင်သွင်းနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
သို့သော် အစဉ်အလာကို လက်ခံထားသည့် သဘောထားတင်းမာသော ပါလီမန်အမတ် များက ထိုသို့ဥပဒေဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ခြင်းက အစ္စလာမ်မစ် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်သည် ဟုဆိုကာ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
အစ္စလာမ်မစ် ဥပဒေတွင် အမျိုးသမီးများ၏ လက်ထပ်ရမည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်ကို သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိ။ သို့ဖြစ်ရာ ထိုဥပဒေ ကြမ်းကို မည်သူမျှ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် နိုင်ငံရေးသမားတို့ကို ဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရေး အတွက် လှုပ်ရှားတောင်းဆိုနေ ကြသော်လည်း ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ၁၀၀ ကျော်က ထိုသို့ကန့်သတ်ခြင်းကို အစ္စလာမ်ဥပဒေနှင့်မညီ ဟုဆိုကာ ကန့်ကွက် ခဲ့ကြသည်။
ယီမင်တွင် ထိုဥပဒေကို မပြဋ္ဌာန်း နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ရရှိလာသည့် အကျိုးဆက် တွေကလည်း မကောင်း။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အသက်ရှစ်နှစ် အရွယ် နျူးရွတ်အလီဆိုသူ ကလေးမလေး၏ ရဲဝံ့ပြောင်မြောက်သော ဆောင်ရွက်ချက် ကလည်း ကမ္ဘာကျော်သွားခဲ့ရသည်။
နျူးရွတ် သည် ဆာနားတရားရုံးသို့ ရောက်လာပြီး သူမခင်ပွန်းသည်ဖြစ်သူနှင့် ကွာရှင်းပေးပါ ရန် လာရောက် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
အမှုက ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီး လူထုရှေ့ တွင် အမှုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံး နျူးရွတ်ကို ကွာရှင်းခွင့် ပေးလိုက်ခြင်းသည် ယီမင်နိုင်ငံတွင် တရားဝင် အောင်ပွဲတစ်ပွဲ အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ရမည်သာ ဖြစ်သည်။
နျူးရွတ်၏ အဖြစ်အပျက်ကလည်း ဆန်းကျယ်လှသည်။ သူမ၏ အဖေက သူမ အသက်ထက် သုံးဆခန့်ကြီးသည့် သူတစ်ဦးနှင့် လက်ထပ်ပေးရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ လက်ထပ် ပြီးသည့်ညတွင် နျူးရွတ်က သူမခင်ပွန်း လောင်းကို တောင်းပန်ခဲ့သည်။
သူမသည် သူနှင့် ဆက်ဆံရန် အဆင်မပြေသေးသဖြင့် အချိန်စောင့်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်ကို ထိုသတို့သားက လက်ခံခဲ့သဖြင့် ကံကောင်း သည်ဟု ဆိုရမည်။
နောက်တစ်နေ့နံနက်တွင် သူမ၏ ယောက္ခမနှင့် ယောင်းမဖြစ်သူတို့ သူတို့ အိပ်ရာကို ရောက်လာပြီး စောင်တွေကို အတင်း ခွာကြည့်ကြသည်။
အိပ်ယာခင်းတွင် သွေးစသွေးန မတွေ့သဖြင့် သူမကိုရိုက်နှက်ကန် ကျောက်ကြတော့သည်။
သူမကလည်း ပြန်ပြီးခုခံကာ ထွက်ပြေးခဲ့သည်။
သူမအိမ်သို့ပြန်ပြီး ပြေးလာစဉ် ဖခင် ဖြစ်သူက မိသားစုဂုဏ်သိက္ခာကို ချိုးဖောက်သည် ဆိုပြီး ဆူပူကြိမ်းမောင်းမှု ပြုရုံ မက ယောက္ခမအိမ်ပြန်ပြီး တောင်းပန်ရန်ကိုပါ အတင်းအကျပ် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
မိထွေး ဖြစ်သူကလည်း ယောက်ျားကို ကြောက်ရ သဖြင့် ဝင်ပြီး မပြောဝံ့ပေ။ နောက်ဆုံး သမီးနောက်သို့ လိုက်လာပြီး တက္ကစီခ ပိုက်ဆံ ပေးကာ တရားရုံးသို့ သွားခိုင်းခဲ့သူမှာ မိထွေးကိုယ်တိုင် ဖြစ်သည်။
နျူးရွတ်သည် တရားရုံးသို့ ဆိုက်ဆိုက် မြိုက်မြိုက်ရောက်လာပြီး သူမကို ကွာရှင်းခွင့်ပေးပါရန် ဦးတိုက် လျှောက်ထားတော့သည်။ သူမဘက်က ထင်ရှားသည့် ယီမင် ရှေ့နေတစ်ဦးက လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့သည်။
ထိုသတင်းကလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ချက်ချင်း ပျံ့နှံ့သွားသဖြင့် မျက်နှာဖုံး သတင်းများ ဖြစ်သွားရကာ နျူးရွတ်ကိုလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိသွားကြပြီး သတ္တိခဲ မလေးအဖြစ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။
နောက်ဆုံးနေ့ ရုံးတော်က ဆုံးဖြတ် ချက်ချမည့်နေ့တွင် ဆာနားတရားရုံးရှေ့ရှိ လူအုပ်ကြီးက သူမကို လက်ခုပ်တီးကာ ဂုဏ်ပြုအားပေး ခဲ့ကြသည်။ သူမကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အထိ ဖိတ်ခေါ် ခဲ့ပြီး ဂုဏ်ပြုပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ပေး ခဲ့သည်။
သူမက သူ့ဖခင်အိမ်တွင် ပြန်နေလိုကြောင်း၊ ကျောင်း ဆက်တက်ချင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နိုင်ငံတကာ၏ ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကို ကောင်းစွာ ခံခဲ့ရသည့် သူမ၏ဖခင်မှာလည်း ဦးကျိုးပြီး မနှစ်မြို့သော်လည်း ပြန်လက်ခံလိုက်ရသည်။
နျူးရွတ်က ပြည်သူအားလုံးသို့ သူမ မှတ်စုစာအုပ်လေးထဲတွင် ရေးပေးခဲ့သည့် စာမှာလည်း ကမ္ဘာကျော်သွားခဲ့ရသည်။
"ရှင်တို့ကလေးတွေကို အရွယ်မတိုင်ခင် လက်မထပ်ပေးကြပါနဲ့။ သူတို့ ပညာရေးကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး မလုပ်ကြပါနဲ့။ သူတို့ကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ချ ပေးပြီး ကလေးဘဝကို မဖျက်ဆီးချင်ကြပါနဲ့" ဆိုသည့်စကားလေးမှာ ယီမင်နိုင်ငံသားများ အတွက် သတိထားစရာ ဖြစ်သည်။
ယီမင်တွင် ကလေးသူငယ် ထိမ်းမြား လက်ထပ်ပေးမှုများကာ ဆက်ဖြစ်နေဆဲပင်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ကလည်း အသက် ၁၂ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် အဘိုးအရွယ် တစ်ဦးနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ရာတွင် သုံးရက်အကြာ၌ အမျိုးသမီးအင်္ဂါ စုတ်ပြတ် ပေါက်ပြဲ သွေးထွက်လွန်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ခဲ့ရ သေးကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက လေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့က ဆိုသည်။
ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်လည်း အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်သူ နာဒါ အယ်လ် အာဒဲလ်၏ ဗီဒီယိုပြကွက်လေး တစ်ခု You Tube ပေါ်တက်လာသည်။
ထို ဗီဒီယိုထဲတွင် သူမ၏မိဘများကို ပိုက်ဆံ ရှိသူထံမှ ငွေကြေးများကို ယူပြီး သူမကို လက်ထပ်ပေးရန် ကြံနေပါသည်ဆိုသည့် ပြောကြားချက် များသည် တစ်ကမ္ဘာလုံး ပျံ့သွားပြီး သန်းပေါင်းများစွာ ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
ယခုနောက်ဆုံး ရာဝမ်၏ အဖြစ်ကလည်း ဥပဒေများဖြင့် ထိန်းချုပ်တားဆီး ပေးခြင်းမပြုလျှင် ယီမင်နိုင်ငံ၏ မပြီးဆုံးနိုင်သေးသော ပန်းချီကားတစ်ချပ်ပမာ ဖြစ်နေဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။
Ref: National Geographic, NBC News, The Guardian, The Aljazeera, CNN News
ကွာရှင်းပြီး လင်ယောကျာ်းကို ခိုးမှုဖြင့် အမှုဖွင့်
Posted by drmyochit Tuesday, September 24, 2013, under မှုခင်း | No comments
ကျပ်သိန်း ၁၁၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိ လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ငွေများ ခိုးယူဟုဆိုကာ ကွာရှင်းထားသည့် လင်ယောကျာ်း အား အရေးယူပေးရန် တိုင်တန်းမှုတစ်ခုကို စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် သာကေတ ရဲစခန်းက အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်ည ၇နာရီခွဲက ၎င်း၏ နေအိမ်သို့မေလအတွင်းက တရားဝင် ကွာရှင်းထားပြီဖြစ်သော ယောကျာ်းဖြစ်သူ ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်း၏ သားများဖြင့် တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် သူမက နေအိမ်နောက်ဖေးတွင် အလုပ်လုပ်
နေခဲ့သည်ဟု ရဲတိုင်တန်းရာတွင် မင်းမင်းမြတ် (၃၇) နှစ်၊ (၆) ရပ်ကွက် သာကေတ မြို့နယ်နေ သူက ထွက်ဆိုထားသည်။
ထို့နောက် ည ၈ နာရီအချိန်တွင် နေအိမ်ရှေ့သို့ ထွက်လာရာတွင် နေအိမ်ရှေ့ခန်းရှိ ဗီရိုတံခါးမှာ ဟနေခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုလည်း ရဲအား ပြောထားသည်။
ဗီရိုအတွင်း စစ်ဆေးရာတွင် စိန်လော့ကတ်သီးအဝိုင်းပုံတစ်ခု တန်ဖိုးသိန်း၈၀၊ စိန်လက်စွပ် အခုံးပုံတစ်ကွင်း တန်ဖိုး၂၅ သိန်း၊ ငွေငါးထောင်တန် တစ်အုပ် တန်ဖိုး ငါးသိန်း ၊ ဆင်းကတ်ပါ ဖုန်းတစ်လုံး တန်ဖိုးနှစ်သိန်း စုစုပေါင်း ကျပ် ၁၁၂သိန်းမှာ ပျောက်ဆုံးနေသည်ကို သိရှိခဲ့ရသည်ဟု ဆိုထားသည်။
ထို့ကြောင့် သူမက ယင်း၏ ကွာရှင်းထားသော လင်ယောကျာ်းဖြစ်သူ အောင်မင်းဦး (၄၀) နှစ်အား ပစ္စည်းများ ခိုးယူသူအဖြစ် စွပ်စွဲ တိုင်တန်းလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်ဟု ရဲဌာနက ဆိုထားသည်။
ယင်းတိုင်တန်းမှုကို မြို့နယ်ရဲစခန်းက (ပ)၅၃၁/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး စွပ်စွဲတိုင်တန်းခံထားရသူအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး လျက်ရှိကာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း မှန်ကန်ပါက ပုဒ်မ ၃၈၀ ဖြင့် တရားစွဲတင်မည်ဟု ရဲမှုခင်း မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပါကစ္စတန်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း အသေခံဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ခံရ၊ ၈၁ဦးကျော်သေဆုံး
Posted by drmyochit Tuesday, September 24, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ပတ်ရ်ှဝါ၊ စက်တင်ဘာ ၂၃
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ဒေသရှိ တနင်္ဂနွေဝတ်ပြု ကိုးကွယ်မှု ပြုလုပ်နေသော ပရိုတက် စတင့် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကို အစွန်းရောက် အသေခံဗုံးခွဲသမားများက တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ကလေးများ အပါ အဝင် အနည်းဆုံး လူ ၈၁ ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း CNN သတင်းတစ်ရပ်က ဖော်ပြထားသည်။
အစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွများက ပါကစ္စတန်ရှိခရစ်ယာန် လူနည်းစုကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှုများလည်း ပြုလုပ်လေ့ ရှိရာ ယခုတိုက်ခိုက်မှုသည် လူသေဆုံးမှု မြင့်မားသည့် တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ် မှတ်တမ်း ဝင်သွား ခဲ့သည်။
တိုက်ခိုက်ခံရသည့် သူတော်စင်များ ဘုရားကျောင်းသည် အစွန်းရောက်များ အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရာ ပတ်ရ်ှဝါမြို့တော် တွင် တည်ရှိသည်။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူ ၅ဝဝ ခန့်က ဘုရားကျောင်း တက်နေကြစဉ် တိုက်ခိုက်ရေးသမား နှစ်ဦးက ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု ပြီးခါနီးတွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
"အသေခံ ဗုံးသမားနှစ်ဦးဟာ ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲကို အဓိကဝင်ပေါက်အတိုင်း ဝင်လာကြပြီး လူတွေအလယ်ကောင်မှာ ဗုံးခွဲလိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ချက် တစ်ရပ်က ဆိုသည်။
ဘုရားကျောင်း၏ အပြင်ဘက်တွင်လည်း အပျက်အစီးများစွာ တွေ့ရှိရပြီး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများနှင့် လူအုပ်ကြီး အချို့ကိုလည်း သွေးအလိမ်းလိမ်းဖြင့် တွေ့ရသည်ဟု CNN က ရေးသားဖော်ပြ ထားသည်။
သေဆုံးသူအရေအတွက် ၈၀ ကျော် သွားပြီဖြစ်ကာ ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၂၀ ကျော်ရှိပြီး ၄င်းတို့ထဲမှ ၁၀ ဦးခန့်သည် စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေတွင် ရှိသည်ဟု ပတ်ရ်ှဝါ ဆေးရုံမှ ဒေါက်တာအာရှက်ဂျာဗက်က ပြောကြားသည်။
ပက်ရ်ှဝါသူတော်စင်များ ဘုရားကျောင်းတော်၏ ဘုန်းတော်ကြီး ဟမ်ဖရီက ထိခိုက်သူများကို ကရုဏာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး အားလုံး ဝိုင်းဝန်းဝတ်ပြု ဆုတောင်းကြရန် ပြောကြားခဲ့သည်။
"ယခုတိုက်ခိုက်မှုဟာ အစိုးရအရာရှိ တွေရဲ့ လူနည်းစုအပေါ် အကာအကွယ်ပေးမှု ပျက်ကွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ပါကစ္စတန် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးက ပြစ်တင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ယင်းတိုက်ခိုက်မှုကို မကျေနပ်ကြသော ပါကစ္စတန် ခရစ်ယာန်များက လမ်းမများပေါ် ထွက်လာကြပြီး အစိုးရအနေနှင့် လူနည်းစု ဘာသာဝင်များကို အကာအကွယ် ပေးပါရန် တောင်းဆိုလျက် ရှိသည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည် မွတ်ဆလင်အများစု ရှိသည့် နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်က နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသည်။
ပေါ်ပြူလာကအလှစစ်နဲ့ အလှမယ်လေးရဲ့ ပရဟိတ
အလှမယ်ဆိုတာဘာလဲ။အလှစစ်ဆိုတာဘာလဲ။တကယ်တော့ လူမူဘ၀ထဲမှာအလှစစ်နဲ့ အလှမယ် အစစ် ကတော့ စိတ်ထား လှမူနဲ့အဲ့ဒီလှသောစိတ်ထားနဲ့ လူမူပရဟိတ(အများကျိုး)သယ်ပိုးရွက်ဆောင်
မူပြုသူသာ။ ခုတော့ပေါ်ပြူလာကအလှစစ်နဲ့ အလှမယ်ကိုဂုဏ်ပြုလိုတဲ့ အတွက်ဒီ ကနေ့ Nang Khin Zay Yar ဖေ့ဘုတ်မှာဖေါ်ပြမူကိုထပ်ဆင့်မျှဝေဂုဏ်ပြုလိုက်ပါရစေ..။
“နန်းခင် ဒီနေ့(၂၄.၉.၂၀၁၃)ရက်နေ့ မနက် ၄ နာရီမှာ ရန်ကုန်မြို့မှ ကားနှင့်ထွက်ခွာပြီး ကွမ်းခြံကုန်းမြို့မှ တဆင့် စက်သဗ္ဗာန်ဖြင့် မောင်နန်းထိုက်အောင် ရဲ့ မိဘများနေထိုင်တဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊
ဒေးဒရဲမြို့နယ်၊ ကျုံဒတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ နံနက် ၁၀ နာရီမှာ ရောက်ရှိပါတယ်။ (၂၂.၉.၂၀၁၃) ရက်နေ့ညကကွယ်လွန်သွားတဲ့ အရိုးကင်ဆာဝေဒနာရှင် ကလေးငယ် မောင်နန်း ထိုက်အောင် ရဲ့ နာရေးကို နန်းခင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်ကာ ကျန်ရစ် သူမိသားစုနှင့်တွေ့ ဆုံပြီး မိသားစုနှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်းနှင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုကို အားပေးနှစ်သိမ့်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မောင်နန်းထိုက်လေးရဲ့ ဈာပနအတွက်သုံးစွဲနိုင်ရန် အလှူငွေပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
မောင်နန်းထိုက်လေး ကောင်းရာဘုံဘဝမှာအေးအေးချမ်းချမ်း နဲ့ ရောဂါဘယ ကင်းရှင်းပြီး ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း …… ဘယ်တော့မှ မေ့လို့မရတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့အဖြစ် အမှတ်ရနေမှာပါ ကလေးရယ်……။
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ ဆေးစာများ - Primolut N အမျိုးသမီးသုံးဆေး
Posted by drmyochit Tuesday, September 24, 2013, under ဆေးပညာအသိဖြင့် | No comments
ကျွန်မက အသက် ၂၃ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်မရှိပါ။ ရာသီမမှန်တာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်ကတည်းက မမှန်တာပါ။ ၃ လမှတစ်ခါ ၂ လမှတစ်ခါလာပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်က ၆ လ အထိကြာနေလို့ စိတ်ပူတာနဲ့ ဆေးခန်းပြပါတယ်။ အာထရာဆောင်း ရိုက်တယ်၊ သွေးစစ်တယ်၊ အကုန်ပုံမှန်ပါပဲရှင့်။ တောင်ပေါ်သူဖြစ်ပြီး လက်လည်းတုန်တတ်လို့ လည်ပင်းဟော်မုန်းဆိုတာလည်းစစ်ပါတယ်။ အကုန်ပုံမှန်ပါပဲရှင့်။ ဆရာဝန်က primolut N ဆိုတဲ့ဆေးကို တစ်နေ့ ၃ လုံး ၂၁ ရက်သောက်ခိုင်းပါတယ်။ မလာတာနဲ့ နောက်ထပ်တစ်လ ဆက်သောက်ခိုင်းပါတယ်။ နှစ်လလောက်သောက်တော့ လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ်မလာတော့ ပြန်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း ဆရာဝန်ဆီ ပြန်မသွားပဲ၊ အဲဒီဆေးကိုပဲဝယ်သောက်ပါတယ်။ သောက်တဲ့လဆိုရင် လာပါတယ်။ မသောက်ရင်မလာပါဘူး။ အမြဲတမ်းလည်း မသောက်ချင်တော့ ၂ လတစ်ခါဝယ်သောက်တာ တစ်နှစ်ကျော်ကြာလာပါပြီ။ တစ်ခါတစ်လေ လည်းတစ်နေ့ ၂ လုံးပဲသောက်ပါတယ်။ မေ့တဲ့နေ့ မသောက်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သောက်ထားတဲ့လ ဆိုရင်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိုးရိမ်မိတာက အဲဒီဆေးက ဒီလိုပဲဆက်သောက်နေမယ်ဆိုရင် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်လားလည်း ကြောက်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး သောက်တာက ဆရာဝန်မှာထားတဲ့အတိုင်း တစ်နေ့သုံးလုံး ၂၁ ရက် သောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကြာလာရင် ဆေးမထိတော့မှာလည်း စိုးနေမိပါတယ်။ ကျွန်မ ဘယ်လိုဆက်လုပ်သင့်လဲရှင့်။ ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ပြုဖို့လည်း အစီစဉ်ရှိတဲ့အတွက် တခြား ကလေးမရနိုင်တာတွေ ဖြစ်လာတတ်လားလည်းသိချင်ပါတယ်။
ကျမ အသက်က ၃၂ ပါ။ အမျိုးသား အသက်က ၂၆ ပါ။ ၁ လခွဲ အထိ ရာသီမလာလို့ ကိုယ်ဝန်စစ်ကြည့်တော့လည်း မဟုတ်လို့ ဆရာဝန် ပြကြည့်တော့ Primolut N ကို မနက်တစ်လုံး ညတစ်လုံးနဲ့ ၁ဝ ရက် သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ၁ဝ ရက် မပြည့်ခင်မှာတင် ၃-၄ ရက်လောက် ရာသီ ကောင်းကောင်း လာပါတယ်။ အခုတော့ ရာသီလည်း ရပ်သွားပါပြီ။ ကလေး ယူလို့ ရနိုင်ပါပြီလားလို့ သိချင်တာပါ။ မျိုးဥထွက်စေတဲ့ ဆေးမျိုးတွေကော သောက်ဖို့ လိုပါသေးလားရှင်။
Primolut N (Generic Norethisterone) ဆေးထဲမှာ Norethisterone ခေါ်တဲ့ Progesterones ဟော်မုန်းတမျိုးတည်း ပါတယ်။ Estrogen မပါဘူး။ ဦးနှောက်ထဲရှိတဲ့ Pituitary ကနေ ထုတ်တဲ့ Gonadotropins ဟော်မုန်းကို တားဆီးပေးတယ်။ Mini-pill ကိုယ်ဝန်တားဆေး ခေါ်တယ်။ ဒီဆေး စွဲသောက်နေသူ တဝက်မှာ ရာသီလာပေမဲ့ မျိုးဥ မထွက်ဘူး။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲ တားဆေးထဲက Estrogen ဟော်မုန်းနဲ့ မသင့်သူတွေကို ပေးတယ်။
ဒီရောဂါတွေအတွက် ပေးတယ် -
1. Dysfunctional uterine bleeding ရာသီဆင်း မရပ်တာကို Primolut N တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၁ဝ ရက် ပေးတယ်။ ၁-၃ ရက်အတွင်း ကောင်မယ်။ နောက်ထပ်အဲလို မဖြစ်အောင် ၃ ပါတ်လောက် ထပ်ပေးတယ်။ တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်၊ ရာသီစက်ဝန်းရဲ့ ၁၉ ရက်ကနေ ၂၆ ရက်အတွင်းမှာ ပေးတယ်။
2. Primary and secondary amenorrhoea မွေးကတည်းကဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်မှဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဝန် မဟုတ်ဘဲ ရာသီ ထိန်နေသူတွေကို Prolactin-producing pituitary tumour ရောဂါမရှိတာ သေခြာအောင် အရင်လုပ်ရမယ်။
• ပဌမနေ့မှာ Estradiol valerate 10 mg ထိုးဆေး ၂ လုံးထိုးတယ်။
• ၁၄ ရက်ကြာရင် Estradiol valerate 10 mg ၁ လုံးထိုးမယ်။
• ရာသီစဆင်းတဲ့နေ့နောက် ၁၉-၂၆ ရက်အတွင်းတွေမှာ Primolut N ဆေးပြားကို တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်ပေးမယ်။
• ၂၈ ရက်မှာ သွေးဆင်းမယ်။
• နောက်ထပ် အဲလို ၂-၃ ပါတ် ဆက်ပေးတယ်။ ရာသီစဆင်းတဲ့နေ့နောက် ၆ ရက်မြောက်နဲ့ ၁၆ ရက်မြောက် နေ့တွေမှာ Estradiol valerate 10 mg ၁ လုံးထိုးမယ်၊ ၁၉ ရက်နဲ့ ၂၆ ရက်မြောက်နေ့တွေမှာ Primolut N ဆေးပြားကို တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ပေးမယ်။
• ထိုးဆေးမပါဘဲ ရာသီစဆင်းတဲ့နေ့နောက် ၁၉ ရက်ကနေ ၂၆ ရက်နေ့တွေအတွင်း Primolut N ဆေးကို တနေ့ ၂ ကြိမ်ပေးပြီးလဲ စမ်းနိုင်ပါတယ်။ 3. Premenstrual syndrome ရာသီမလာခင် ဖြစ်တတ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်၊ စိတ်ကျ၊ ကိုယ်ရောင်၊ ရင်သားတင်း၊ စတာတွေ သက်သာစေဘို့ ရာသီစဆင်းတဲ့နေ့နောက် ၁၉ ရက်ကနေ ၂၆ ရက်နေ့အတွင်း Primolut N ဆေးကို တနေ့ ၂-၃ ကြိမ် ပေးတယ်။
4. Timing of menstruation ရာသီလာရက်သတ်မှတ်ခြင်း၊ Progestogen-Estrogen ဟော်မုန်း ၂ မျိုးပါ တားဆေးက ပိုသင့်တော်တယ်။ Primolut N တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၁ဝ-၁၄ ရက် သောက်ပါ။ ဆေးကုန်ပြီး ၂-၃ ရက်မှာ သွေးဆင်းပါမယ်။
5. Endometriosis သားအိမ်ရောဂါတမျိုး၊ ရာသီလတခုရဲ့ ၅ ရက်မြောက်နေ့မှာ Primolut N ဆေး တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်ပါ၊ သွေးတစက်စက်စလာရင် ၂ ပြား၊ ၂ ကြိမ် တိုးသောက်ပါ။ သွေးရပ်သွားရင် ဆေးပြန်လျှော့ပါ။ ၄-၆ လ ကြာ သောက်ရမယ်။ ဆေးကုသနေတုံးမှာ မျိုးဥလဲမထွက်ဘူး၊ ရာသီလဲမဆင်းဘူး။ ဆေးရပ်လိုက်မှ သွေးဆင်းမယ်။
ဒီရောဂါတွေအတွက် မပေးရဘူး -
1. Pregnancy ကိုယ်ဝန် ရှိနေရင်၊
2. Lactation နို့တိုက်နေရင်၊
3. Thromboembolic သွေးခဲရောဂါ ရှိရင်၊
4. Diabetes mellitus ဆီးချိုရှိရင်၊
5. Severe hepatic disease အသဲမကောင်းရင်၊
6. Liver tumours အသဲကင်ဆာ ရှိရင်၊
7. Sex hormone-dependent malignancies တခြား လိင်ဟော်မုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကင်ဆာ ရှိရင်၊
Side effects ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ -
Visual disturbances မျက်စိကြည့်မကောင်း၊ Nausea ပျို့ချင်၊ Headache ခေါင်းကိုက်၊ Oedema ကိုယ်ရောင်၊ Migraine မိုင်ဂရင်း အမူးရောဂါ၊ Dyspnoea အသက်ရှူခက်၊ Rash, Urticaria အရေပြားအနီပြင်ထွက်၊ Change in sex drive လိင်ဆန္ဒဖြစ်တာ အပြောင်းအလဲ ရှိတတ်တယ်၊ Weight gain လူဝလာတတ်တယ်၊ Hair loss ဆံပင်ကျွတ်တတ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် Excessive hair growth အမွှေးထူတတ်တယ်၊ Sleepiness အိပ်ချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် Difficulty sleeping အအိပ်ခက်တယ်။
Special precautions အထူးသတိထားစရာတွေ -
Diabetes mellitus ဆီးချိုရှိနေသူများ၊ Psychic depression စိတ်ကျရောဂါရှိသူများ၊ Phenytoin, Barbiturates, Primidone, Carbamazepine, Rifampicin, Griseofulvin, Oxcarbazepine, Rifabutin ဆေးတွေနဲ့တွဲပေးတာ သတိထားရမယ်။
Posted by drmyochit Tuesday, September 24, 2013, under ဆောင်းပါး | 1 comment
ဆေးရုံတစ်ခုထဲက အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပေါ့။ လူနာ ၂ ယောက်အတူနေတယ်။ တစ်ယောက်က အဝင် တံခါးဝမှာ။ တိုက်ပွဲ ဗုံးဒဏ်၊ ကျည်ဒဏ်ကြောင့် မျက်လုံး ပက်တီးစီးထားရပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ကြေမွနေသူ။ အသက်ရှင်ဖို့ စိတ်အားပြင်းထန်မှ လူပြန်ဖြစ်မယ့်အနေအထားတစ်ခုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ကတော့ သူ့ညာဘက်ခြမ်းမှာ။ တိုက်ပွဲက ရှေ့ တန်းအတူတက်တဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူက ဆေးရုံအရင်ရောက်ထားသူမို့ နံရံဘက်အခြမ်းမှာ နေရာရနေသူ ဖြစ်ပါတယ။်
မျက်လုံးမမြင်၊ လှုပ်ရှားဖုိ့ခက်ခဲတဲ့ သူက နံရံဘက်ကလူကို မေးတယ်။ “ဘာတွလုပ်နေလဲ ကိုယ့်လူ”
“အပြင်မှာ ကလေးလေးတွေဆော့တာ ကြည့်နေတာ”
“ဒါ့ပေါ့ သယ်ရင်းရ၊ နေဝင်ချိန်မို့လားမသိ၊ တောင်တန်းဘက်မှာ နီထိန်ထိန် မြင်ကွင်းလေးက အတော်လေး ကြည့်ကောင်းတယ်ကွ၊
ဟောဟိုမှာ ပန်းခြံထဲ င့ါမိသားစုတွေ လက်လှမ်းပြနေတယ်။ မင်းအိပ်နေတုန်း င့ါကို ဝင်တွေ့သွားတာလေ”
ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ပြတင်းပေါက်နေပြီးတော့ အပြင်ဘက်က
မြင်ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ အကြောင်းအရာ များကို စီပါပတ်ကုံးပြောပြီး အရမ်းလှပနေတာ သူ့ကို မြင်စေချင်ကြောင်း၊ မြန်မြန်နေကောင်းအောင် အားတင်း၊ အသက်ရှင်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဒါနဲ့ မျက်စိပတ်တီးစည်းထားပြီး တစ်ကိုယ်လုံး လှုပ်ရခဲနေသည့်တိုင် အပြင်သဘာဝအလှတွေကို တစ်ခေါက် ပြန်လည် တွေ့နိုင်ဖို့ အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်လေး မွေးဖွား လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဆေးလည်း ပုံမှန်သောက်ပြီး ကျန်းမာဖို့ အားတင်းရင်း နေ့တိုင်း
ပြတင်းပေါက်တစ်ဖက်က မြင်ကွင်းအကြောင်းကို မေးမြန်းပါတယ်။
တစ်နေ့ သူပြန်နေကောင်းပါပြီ။ မျက်လုံးပတ်တီးဖွင့်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးက
ကျောက်ပတ်တီးဖြေလိုက်ချိန် သူ့ဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ လူကို မမြင်ရတော့လို ဘယ်ရောက်သွားလဲမေးတယ်။ ပိုပြီးတော့ အံ့သြတာ တစ်ခုက အဲ့ဘေးမှာ ပြတင်းပေါက် ရှိမနေခြင်းပါ။ ဒါကြောင့် မေးခွန်းပေါင်း များစွာနဲ့ သူနာပြုကို မေးပါတော့တယ်။ သူနာပြုကတော့ အောက်ပါအတိုင်း
“ရှင့်ရဲဘော်က ဆေးရုံအရောက်စောပေမယ့် ကံကတော့ မကောင်းရှာဘူး။ မျက်လုံးလည်း မမြင်ရဘူး။ သွေးကင်ဆာ ပြန်ဖောက်လာတာမို့ ရက်ပိုင်းပဲ အသက်ရှင်ဖို့ကျန်တော့တဲ့လူ၊ မနေ့လေးတင် ဆုံးသွားလို့ အခန်းကနေ သယ်ထုတ်ပြီးသွားပြီ။ ရှင်က စိတ်ဓာတ်ခိုင်မှ အသက်ရှင်ရမယ့်သူမို့ အားပေးစကား နေ့တိုင်းပြော ပေးတာပါ၊ နံရံမှာ ပြတင်းပေါက်မပါတဲ့ အချက်အတွက်ကတော့ စိတ်မရှိပါနဲ့”
လူတွေဟာ ကိုယ်တစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့  လှပမှုကို မခံစားနိုင်တော့ဘူး။ မခံစားနိုင်တဲ့အပြင် တစ်ခါတစ်လေကျ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ကိုယ့်ဒုက္ခ အပူတွေကို ဆီးကူးစေမိကြ ပါတယ်။ ကံကြမ္မာဆိုး တံခါးဝရောက်နေချိန် နောက်တစ်ယောက် ဝင်မရအောင် တံခါးမှာ ပိတ်ထားပေးဖို့ထက် ကိုယ်နဲ့ အတူ ဝင်စေဖို့ လက်ကမ်းခေါ်တတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်အား အဆိုးရွားဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တစ်ယောက်မှာ ဘယ်လိုအခက်တွေရှိနေရှိနေ၊ ဒုက္ခတွေ ရှိနေရှိနေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ သူတစ်ပါး အပေါ်မှာ အကြင်နာ၊ မေတ္တာတရားတို့နဲ့ စာနာ၊ ကူညီ၊ ပျော်ရွှင်စေတတ်မှုက တန်ဖိုးရှိသော ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်လိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ။်
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် အသက်(၄၅)နှစ်အရွယ်ရှိ လက်ထပ်ပြီးသော ကလေးသုံးယောက်အမေ အနုပညာ သင်ကြားပေး သည့် ဆရာမက သူမ၏ကျောင်းမှ အသက်(၁၃)နှစ်မှ (၁၇)နှစ်အရွယ်ရှိ ကျောင်းသားနှစ် ဦးနှင့် သူမ၏အိမ်တွင် အတူဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သူမအမျိုးသား အိမ်ပေါ်ထပ်တွင် အိပ်ပျော်နေသောအချိန်တွင်လည်း သူမဟာ အောက်ထပ်မှာ ကျောင်းသားနှင့် အပျော် ရှာခဲ့သော အဖြစ်တစ်ခုလည်း ရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
Apple ထုတ်ကုန်များကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းပေးတော့မည်
Posted by drmyochit Tuesday, September 24, 2013, under သတင်းများ | No comments
Apple လက်ပ်တော့ အသုံးပြုနေသူ တဦး (ဓာတ်ပုံ – မေစစ်ပိုင် / ဧရာဝတီ)
အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် Apple အမှတ်တံဆိပ် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဧရာဝတီဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ ဂျန်းရှင်း မော်တင် ဈေးဝယ်စင်တာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် Apple ထုတ်ကုန် အမှတ်တံဆိပ် ပစ္စည်းများ ရောင်းချမည့် MDrive ဆိုင်ဖွင့်ပွဲနှင့် သတင်းစာတွင် ရှင်းလင်းပွဲအပြီးတွင် Magellan Group ၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ် မြန်မာပြည်တွင် Apple ထုတ်ကုန်များကို ပထမဆုံး တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်ယူ ရောင်းချခွင့် ရရှိထားသည့် MDrive အရောင်းဆိုင်၏ တာဝန်ရှိသူလည်း ဖြစ်သူ ကိုမြတ်ထူးက အထက်ပါ အတိုင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ သူဌေးရဲ့ ထောက်ခံကြောင်း လက်မှတ်လိုတယ်၊ ဒါဆိုရင် တခြား ဘဏ်အကောင့်လည်း မလိုဘဲနဲ့ ထောက်ခံစာ တခုနဲ့တင် အရစ်ကျ စနစ်နဲ့ ရဖို့လုပ်ပေးမယ်။ နောက်တခုကတော့ ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ဖြစ်၊ သက်ဆိုင်သူ တယောက်ကဖြစ်ဖြစ် ဘဏ်မှာ ငွေစုထားမယ်ဆိုရင် အာမခံပေးလို့ရမယ်” ဟု ကိုမြတ်ထူးက ရှင်းပြသည်။
ထို့အပြင် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့ ကုမ္ပဏီရှိ ကွန်ပျူတာ များကို Apple ထုတ်ကုန်များဖြင့် လဲလှယ်လိုပါက ဧရာဝတီဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူလိုကြောင်း လက်မှတ်ထိုးမည် ဆိုပါက Mdrive အရောင်းဆိုင်မှ အရစ်ကျ ဝယ်ယူမည့် ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း အာမခံငွေကို ဘဏ်တွင် အာမခံအဖြစ် တင်ထားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ Apple ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများမှ မည်သည့်အမျိုးအစားကို မဆို တနှစ် အရစ်ကျ ကာလသတ်မှတ် ရောင်းချ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးရန် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဧရာဝတီဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူကလည်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် Apple ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ အရစ်ကျ ဝယ်ယူမည့်သူများအတွက် ချေးငွေများ ထုတ်ပေးရန် အဆင်သင့် ရှိနေပြီဟု ပြောကြား သွားသည်။
MDrive အရောင်းဆိုင် အနေဖြင့် Apple ပစ္စည်းကိုင်ထားသည့် မည်သူမဆို အခမဲ့ အကောင့်ဖွင့်နည်း၊ ဂိမ်းများ၊ တခြား ဆော့ဖ်ဝဲလ် အသုံးပြုနည်းများ ကိုလည်း အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ရောင်းတာတွေ တဖြည်းဖြည်း တိုးလာတာ ကောင်းပေမယ့် ပစ္စည်းတခု ဝယ်မယ်ဆိုရင် အဆင့်ဆင့် ဖြတ်နေရတာ အချိန် အရမ်းကြာတယ်၊ ဆမ်ဆောင်းမှာ အရစ်ကျ ရောင်းတုန်းကလည်း ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ တလကျော်လောက် စောင့်ရသလို ထောက်ခံချက်တွေလည်း အများကြီး တောင်းတယ်၊ AGD ဘဏ်နဲ့ ချိတ်ဆက် ရောင်းတာတွေလည်း အဲဒီလိုပဲပေါ့။ အာမခံချက်တွေ၊ အာမခံပေးမယ့်သူတွေ အများကြီး တောင်းနေတော့ အရစ်ကျ ဝယ်ဖို့ လူတွေ စိတ်မဝင်စားကြတော့တာ” ဟု MDrive အရောင်းဆိုင် ဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် ကိုဇော်မျိုးထွန်းက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ဟန်းဆက်များ၊ ကင်မရာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်ပ်တော့၊ ကား နှင့် ဆင်းကတ် စသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ အရစ်ကျ စနစ်ဖြင့် ရောင်းချမှုကို အာရှစိမ်းလန်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ် (AGD) နှင့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတချို့က ဆောင်ရွက်နေပြီး နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်တခု ဖြစ်သည့် ဆမ်ဆောင်း ကုမ္ပဏီကလည်း ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးလျက် ရှိသည်။
ထို့အပြင် ကားကုမ္ပဏီများနှင့် ပြင်ပ ဖုန်းအရောင်းဆိုင် တချို့ကလည်း သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း ကုန်ပစ္စည်းများကို အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ပြီး အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးလျက်ရှိသည်။
အိမ်ထောင်ရေးကို အဖတ်ဆည်ရန် မျှော်လင့်ဆဲဟု မိုက်ကယ်ဒေါက်ဂလက်စ်ဆို
အသက်(၆၈)နှစ်ရှိ မိုက်ကယ်က မိမိသည် ဇနီးသည်နှင့် ပြတ်ရှင်းမှုမျိုးကို မလိုလားကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
မိမိ၏ အိမ်ထောင်ရေးကို အဖတ်ဆည်ရန် မျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း မိုက်ကယ် ဒေါက်ဂလက်စ်က ဖွင့်ဟ ပြောကြားလိုက်သည်။ ဟောလီးဝုဒ်၏ ဝါရင့် မင်းသားကြီးသည် ဇနီးဖြစ်သူ ကက်သရင်း ဇီတာဂျုံးစ်နှင့် ခွဲခွာ နေထိုင်နေသူ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ နှစ်ဦးသည် အခက်ခဲဆုံး ကာလများကို အတူတကွ ဖြတ်သန်း ခဲ့သော် လည်း ပြီးခဲ့ သည့် လပိုင်းက ခွဲခွာနေထိုင်ရန် စဉ်းစားနေပြီဟု အတည်ပြု ကြေညာခဲ့သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ညက အမ်မီဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် မိုက်ကယ်က မိမိသည် ကက်သရင်းနှင့် ညှိနှိုင်းကာ သဘောထား ကွဲလွဲမှု များကို ဖြေရှင်းသွားနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ အသက်(၆၈)နှစ်ရှိ မိုက်ကယ်က မိမိ သည် ဇနီးသည်နှင့် ပြတ်ရှင်းမှုမျိုးကို မလိုလားကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
အမေရိကန် သတင်းထောက် ဘီလီဘုရ်ှနှင့် တွေ့ဆုံမှုတွင် ၎င်းက "ကက်သရင်းဟာ တကယ့်ကို အံ့ဩစရာ အမျိုးသမီးပါ။ သူဟာ ခမ်းနားပြည့်စုံတဲ့ ဇနီးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူနဲ့ စကားပြောဖြစ် ပါတယ်။ သူ့ဆီက ချစ်စရာ မှတ်ချက် တချို့လည်း ရရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကွဲလွဲမှုတွေအတွက် ကျွန်တော် တို့နှစ်ယောက် အတူတူ အဖြေရှာနိုင်ဖို့ တကယ်ပဲ အလေးအနက် မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ချင်း ခဏတာ ခွဲခွာထားတယ် ဆိုတာက အမှန်ပါပဲ။ ဒီအတွက် အကြောင်းပြစရာ တချို့ရှိ ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဒီလို ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးက လိုအပ်တတ်တယ်လေ"ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မိုက်ကယ်နှင့် ကက်သရင်းတို့တွင် အသက်(၁၃)နှစ်ရှိ ဒိုင်လန်နှင့် အသက်(၁၀)နှစ်အရွယ် ကာရီစ်ဆိုသည့် ကလေးနှစ်ဦးရှိသည်။ မိုက်ကယ်သည် အမ်မီဆုပေးပွဲတွင် မီနီစီးရီးသို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်အတွက် Behind the Candelabra ဇာတ်ကားဖြင့် အကောင်းဆုံး မင်းသားဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ ဆုလက်ခံယူပြီးနောက် မိုက်ကယ် က ပရိသတ်များကို အမှတ်တရ စကားဆိုခဲ့ရာ၌ "ကျွန်တော့်ကို ထောက်ပံ့ အားပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီး ကက် သရင်းကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒိုင်လန်နဲ့ ကာရီစ်တို့ ကိုရောပေါ့။ မကြာခင် ကျွန်တော်နဲ့ သူတို့ အတူဆုံဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်"ဟု ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားသည်။ မိုက်ကယ်နှင့် ကက်သရင်းတို့သည် အိမ်ထောင်သက်တမ်း (၁၃)နှစ် အကြာတွင်မှ သီးခြားခွဲခွာ နေထိုင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီး၏ အလောင်းအား မီးရှို့စင်တွင် မီးတင်ရှို့နေကြောင်း ယင်းရွာသားတစ်ဦးက ရဲကို အသိပေးခဲ့သည့် အတွက် ၎င်းတို့အား သတ်ခဲ့သော မိသားစုဝင်အချို့ကို ဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အသက် ၁၅ နှစ် သို့သော် ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး ကင်ဆာ သုတေနသပညာရှင်
အခုတော့ အသက် ၁၆ နှစ် ရှိသွားပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်တိတိက သူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကို သိရင် လက်ရှိ
သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို လူတိုင်း ခန့်မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အမည်က Jack Andraka လို့ အမည် ရပါတယ်။
ငယ်ငယ်လေးကတည်းကနေ သူ သတိထားမိလာတာ တစ်ခုက လူအတော်များများဟာ ကင်ဆာကြောင့် ကွယ် လွန်ခြင်းပါ။ အိမ်နီးနားချင်းတွေအပြင်၊ ဆွေးမျိုးသားချင်းတွေအထိပါ ကင်ဆာကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံး သွားရတာတွေ မြင်ရတော့ နာကျည်းစိတ်တစ်ခု ရလိုက်သလိုပါပဲ။ အသဲ၊ အစာအိမ်နဲ့ ဂလင်းမှာ အခြေတည်ပြီး ဖြစ်တဲ့တဲ့ ပန်ကရိယ ကင်ဆာ (ဂလင်းကင်ဆာ) ဟာ သူ့အတွက် ရန်သူ တစ်ကောင် ဖြစ်လာပါတယ်။ အကြောင်း ကတော့ စစ်ဆေးလို့အဖြေမပေါ်ပဲ အချိန်လွန်ပြီး လူတွေ သေနေကြရလို့ပါ။ ဒီတော့ မီးဖိုချောင်ဟာ သူ့အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်း တစ်ခုအလား ဖြစ်လာပါတယ်။
အဲ့နောက်ပိုင်း အမေရိကန်ကရော၊ ကမ္ဘာက ပေးအပ်တဲ့ ဆုတံဆိပ်အမျိုးမျိုး ရရှိပြီး လူသိများတဲ့ သုတေသန ပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ လက်ရှိ ဆုကြေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁သိန်းကျော် ရရှိထားပြီး အခြားသော သုတေသနများ ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုလည်း အပြည့်အဝရရှိထားပါတယ်။ 2013 Social God Summit မှာ တက်ရောက် ဟောပြောခွင့်ရပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ၁ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ရှိတဲ့ သုနေတနပညာရှင် လူဦးရေထဲကို ပါဝင်လာတဲ့ ထူးချွန်ပညာရှင် တစ်ဦးမို့ပါ။
Posted by drmyochit Tuesday, September 24, 2013, under နည်းပညာ | No comments
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ သတင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ငိုအားထက်ရယ်အားသန်ရ မလိုပါပဲ။Apple ကသူ့ရဲ့  iPhone 5S ကိုယခင်လက်ဟောင်းဖုန်းတွေထက် အသုံးပြုသူပိုမိုလုံခြုံစေတဲ့ Touch ID fingerprint စနစ်ကို ထည့်သွင်း ပေးထားတာ အားလုံးအသိပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပဲလုံခြုံတယ်ပဲဆိုဆို နည်းပညာခေတ်ကြီးထဲ မှာဘယ်အရာကိုမဆို ဖြေနိုင်တဲ့ နည်း ကတော့ ရှိစမြဲပဲလေ။ဒါကြောင့်ပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတင်ပဲ finger စနစ်ကိုဖြတ်စီးနိုင်တဲ့ ဂျာမနီက Hacker တောင်ပေါ် လာသေးတာပဲ။
အခုလည်း ဂျပန်ဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုမှလွှင့်တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်အရ Touch ID fingerprint နဲ့သာ သတ်မှတ် ထားတဲ့ iPhone 5S ကိုရင်သားဖြစ်တဲ့(nipple) နဲ့လည်း Security သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို ဗီဒီယို နဲ့ မှတ် တမ်း တင် သက်သေပြထားတာကို ပေါက်ပေါက်ရှာရှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အမျိုးသားရဲ့ ရင်သား(nipple) နဲ့ Security ပြုလုပ်ထားပုံကို အောက်ပါဗီဒီယို ဖိုင်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင် ပါတယ်။
Posted by drmyochit Tuesday, September 24, 2013, under အနုပညာ | No comments
မြန်မာပြည်ကရော့ခ်အဆိုတော်ကြီး ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ကျေးဇူးရှင် သီချင်းရေးဆရာ၊အဆိုတော် Rod Stewart ဟာ ၁၉၄၅ခုနှစ် လန်ဒန်မြောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအခုဆိုသူဟဟာ ၆၇နှစ်ရှိနေပါပြီ။ သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ကွဲရှရှ အသံ Raspy Voice နဲ့ ၁၉၆၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံးအယ်လ်ဘမ် စတင် သီဆိုခဲ့တယ်။
(ဒီလိုကွဲအတ်တဲ့အသံမျိူးကို အဆိုတော်တွေဟာ သီချင်းဆိုတာများရင်ရတတ်သလို အသံမစမ်းဘဲ တခါတည်းအသံသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ရတတ်ပါတယ်၊ Stevie Nicks ဆိုတဲ့အဆိုတော်ကတော့ မမျှော်လင့်ပဲ vocal cord tissue မှာအမာရွတ်ဖြစ်ပြီး ခပ်ရှရှအသံရခဲ့တာတဲ့ )
သူဟာအဖေစကော့နဲ့ အမေအင်္ဂလိပ်မိသားစုမှ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျာမန်တွေ North Gate ရဲစခန်း ကို V-2 ဗုံးတွေနဲ့မကြဲခင်နှစ်နာရီအလို မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ သူကမောင်နှမငါးယောက်ထဲမှာ အငယ် ဆုံးဖြစ် ပါတယ်။
သူတို့မိသားစုဟာ ချမ်းသာတဲ့အထဲမပါသလို ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုထဲလည်းမပါပါဘူး။ သူဟာ ငယ်စဉ်က ပညာရေး မှာမထင်မရှား သူလိုကိုယ်လိုထဲကပါပဲ။
သူ့အဖေ အသက်(၆၅)နှစ်အရွယ်မှာ အိမ်အရောင်းအဝယ်သမားဘဝကအနားယူပြီး သတင်း စာဂျာနယ် အရောင်းဆိုင် ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့မိသားစုက ဆိုင်အပေါ်ထပ်မှာနေတာပါ။ သူတို့မိသားစုအကုန်လုံးကဘောလုံးဝါသနာအိုးတွေ ဖြစ်ကြပြိး Rod Steward ကသူတို့မိသားစုထဲမှာ ပါရမီအပါဆုံးဖြစ်တယ်။ အသက်(၁၅)နှစ် အရွယ်မှာ ကျောင်းကထွက်ပြီး အဝတ်အထည်တွေပုံနှိပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ အချိန်ပိုင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၁ မှာBrentford F.C အလုပ်သင်အဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း မနက်စောစောထပြီး ပထမ အသင်း ၁၁ယောက်ရဲ့ ဖိနပ်တွေကို တိုက်ချွတ်ပေးနေရတာကိုတော့မနှစ်သက်လှပါဘူး။ သူဟာဘော်လုံး ကျွမ်းကျင်မူ့ ရှိပေမယ့် သူ့ရဲ့အလေးချိန်ပေါင်(၁၃၀)ပဲရှိတာဟာသူ့ကိုအခက်အခဲ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်တက်အောင် အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်တာ ကွင်းဘေးမှာမကြာခဏအန်မိတဲ့အထိပါပဲ။
နောက်နှစ်လအကြာမှာတော့ သူဟာအသင်းကထွက်ခဲ့တဲ့အတွက် သူ့အဖေကို အကြီးအကျယ် စိတ်ပျက်စေ ခဲ့ပါ တယ်။
သူ့ကိုယ်သူသုံးသပ်တာကတော့ သူဟာကျွမ်းကျင်မူ့ရှိပြီး ဆန္ဒမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရှေ့ရေး ကိုသုံးသပ် လိုက်တော့ ဂီတဘက်ကိုသွားမြင်မိပါတယ်။ ငါလုပ်နိုင်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ် သီချင်းဆိုတာရယ် ဘော်လုံး ကန်တာ ရယ်။
အရက်သောက်ရင်းသီချင်းဆိုလို့ရတယ် အရက်သောက်ပြီးဘော်လုံးကန်လို့မရဘူးလို့ဆိုတယ်။(ဒီလိုအတွေးခေါ်ကြတူသွားပြန်ပြီ)နောက်တော့အိမ်အလုပ်ကိုကူလုပ်ရင်း သတင်းစာဖြန့်တဲ့အလုပ်၊ Highgate သင်္ချို င်းမှာသုဘရာဇာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
နောက်သင်္ချို င်းမှာ ခြံစည်းရိုးပြင် ဂူဆိုင်းပုဒ်ရေးတဲ့အလုပ်လဲလုပ်ပါသေးတယ်။ (သူသုဘရာဇာ လုပ်တာ ကျွန်တော်တို့ ထင်ထားသလို ဆင်းရဲလွန်းလို့ မဟုတ်ဘဲ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သေခြင်းတရားကို ရင်ဆိုင်ရဲအောင်လို့ ဆိုပါတယ်)အဲ့ဒီနောက် အသံသွင်းထားတဲ့ သီချင်းများယူဆောင်ကာ ဒိန်းမတ်လမ်း မှာရှိတဲ့ နာမည်ကျော်ထုတ်လုပ်သူ Joe Meek ဆီကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ သူရခဲ့တာကတော့ Meek ဆီကရိုင်းဆိုင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှူ့သာဖြစ်ပါတယ်။
Stewart ဟာ အဲ့ဒီအချိန်မှာ တက်ကြွတဲ့ နြူကလီးယားဆန့်ကျင်သူပါ။ ဒီလိုဆန့် ကျင်ဆန္ဒပြ ချီတက်ပွဲမှာ ပါဝင် တာကြောင့် အဖမ်းခံ ရပါသေးတယ်။ ဒီလိုပွဲတွေမှာ သူကောင်မလေးတွေနဲ့ ဇတ်လမ်းဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
၁၉၆၂မှာတော့ လန်ဒန်အနုပညာကျောင်းသူလေး Suzannah Boffeyနဲ့ ချစ်ကြိူးသွယ်ရာက ကိုဝင်းကြည် ရခဲ့ပါ တယ်။ Stewart ရောသူ့မိဘတွေကပါ သူ့ကိုလပ်မထပ်စေချင်သေးပါဘူး။ ဒါနဲ့ ကလေး မလေး Sarah Streeter ကိုသူများကိုမွေးစားဖို့ပေးခဲ့ပြီး Stewart နဲ့ Suzannah Boffey တို့ရဲ့ဇတ်လမ်းပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
သမီး Sarah Streeter နဲ့ ဖေဖေ Rod Stewart
နောက်ထပ် ကျေးလက်တေးအဆိုတော်မလေး Wizz Jones နဲ့တွဲခဲ့ပြန်ပါတယ်။ သူတို့ဟာနောက်ထပ် (၁၈)လတိုင်တိုင် လက်တွဲညီညီတွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ Stewart ဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာThe Kinks အဖြစ်နာမည်ကြီးလာမဲ့ The Ray Davies Quartet အဖွဲ့ရဲ့ပင်တိုင်အဆိုတော်အဖြစ် စတင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ငယ်ငယ်ကကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ The Ray Davies Quartet အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Ray Davie ကအဆိုတော်လုပ်ရတာသူနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ထင်နေလို့ပါ။
ခဏပဲတွဲရသေးတယ် Drummer သမားကသူ့ရဲ့အသံကို အပြစ်တင်တာကြောင့်လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။
သူဟာဒီအချိန်မှာ R&B Soul ၊ Rock & Roll ကိုနှစ်သက်နေပါပြီ။ အဲ့ဒီနောက်လန်ဒန်က R&Bတီး ဝိုင်းတွေမှာ အချိန်ပိုင်းဘာဂျာမှူတ်တဲ့သူharmonica(ဆိုးပါ့) ချိန်ပိုင်းအဆိုတော်အဖြစ်အသက်မွေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာသူ့ဘဝမှာပထမဆုံးဂီတနဲ့ အသက်မွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပြိူင်နက်တည်းမှာပဲ သူ့အိမ်အလုပ်နဲ့ သူ့အကိုရဲ့ပန်းချီကားမှန်ဘောင်လုပ်ငန်းမှာလဲ ကူညီနေပါသေးတယ်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ Jimmy Powell & the Five Dimensions အဖွဲ့ကသူ့ကို Harmonica အဖြစ်ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ဟာ Rolling Stone မဂ္ဂဇင်းကမကြာမကြာဖေါ်ပြလေ့ရှိတဲ့ နာမည်ကျော်Studio 51 မှာအပတ်စဉ်ဖျော်ဖြေရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ London R&B လောကထဲကို Steward တစ်ယောက်ချည်းနင်းဝင်ရောက်လို့လာသလို သူ့ရဲ့ Harmonica(ဘာဂျာ)ဟာလည်း Mick Jaggerရဲ့ သွန်သင် မူ့နဲ့ တိုး တက်လာပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Powell နဲ့ နာမည်ရလာတဲ့ stewart တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ရာက ဒီအဖွဲ့နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၆၄ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနေ့တစ်နေ့မှာ All Stars အဖွဲ့ရဲ့စတိတ်ရိုးသွားကြည့်ပြီးအပြန် မူးမူးနဲ့ ဘူတာရုံ ပလက်ဖောင်းပေါ် ရထားစောင့်ရင်း "Smokestack Lightnin'"သီချင်းလေးကိုသူ့ဘာဂျာလေးနဲ့ တီးမှူတ်ေ နပါတယ်။ ဒါကို All Stars အဖွဲ့ရဲ့ပင်တိုင်အဆိုတော်Long John Baldry ကတွေ့သွားပြီး သူတို့အဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ် ခဲ့တယ်။ Rod Stewart ရဲ့အမေသဘောတူညီမူ့ကိုရပြီးတဲ့နောက်မှာ Harmonica အဖြစ်ရော အဆိုတော်အဖြစ်နဲ့ပါလုပ်ဖို့ သူ့ကိုတစ်ပတ်၃၅ပေါင်နဲ့လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့ရဲ့ရှက်တတ်တဲ့အကျင့် လူတွေကိုကြောက်တဲ့အကျင့်တွေပျောက်လာပြီး ကိုယ်ပိုင် ဟန်တစ်ခု တည်ဆောက် လာနိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့နဲ့အတူတီးခတ်နေစဉ်မှာပဲ သူ့ရဲ့ အစမ်း အသံသွင်းမူ့ အချိူ့ ကိုပြု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်း ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေမှာ တခါတရံပါ လာ တတ်ပြီး ပထမဆုံး single ခွေ ကို၁၉၆၄မှာအသံသွင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာလဲ Baldry နဲ့အငြင်းပွားခဲ့ပြီး အဖွဲ့နဲ့ခွဲခွာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲ မှာထွက်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့လိုက် အခွေတွေ ကလဲ စီးပွားရေးတွက်ခြေမကိုက်တဲ့အပြင် နာမည်တောင်လူမသိလိုက်ပါဘူး။ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ သူလဲသူ့အသံခပ်အက်အက်ကိုစိတ်ကုန်နေပါပြီ။နောက်ထပ်တစ်ခါ ဂစ်တာသမားJeff Beckက ရှာဖွေတွေ့ ရှိသွားပြီး သူတို့အဖွဲ့ Jeff Beck Groupမှာ အဆိုတော်နဲ့သီချင်းရေးဆရာအဖြစ်ငှားရမ်းခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့နဲ့ အကျိူးပေးပုံပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ဥရောပခရီးစဉ် အမေရိကန် ခရီးစဉ် လှည့်လည်ဖျော်ဖြေ တဲ့ပွဲတွေ မှာတော်တော် လေးအောင်မြင် မူ့ရခဲ့တယ်။ ၁၉၆၈မှာသူတို့အဖွဲ့လိုက်အခွေ The Truth ကိုဖြန့်ချီခဲ့ပြီး UK မှာမအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် အမေရိကန်မှာတော့ နံပါတ်၁၅နေရာချိတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်တိုက်ဆိုသလိုအောင်မြင်လာလိုက်တာ Every Picture TellsaStory ဆိုတဲ့ တတိယမြောက်ခွေ မှာတော့ Rod Stewart ဆိုတဲ့နာမည်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်ထူလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ရေဒီယိုတွေကသူ့သီချင်းတွေကိုစတင်လွင့်နေပါပြီ။ ၁၉၇၅ခုနှစ်မှာတော့ Rod Stewart တစ်ယောက် Los Angeles ကိုပြောင်းရွေ့သွားခဲ့ပြီး Atlantic Crossing ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခွေမှာ နာမည်ကြီးသီချင်း Sailing (ရွက်လွင့်ခြင်း၊ဇော်ဝင်းဋ်)နဲ့ I Don't Wanna Talk About It (ဒီခေါင်းစဉ်အတိုင်း၊ဇော်ဝင်းထွဋ်)တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတစ်ုပုဒ်ချင်းအနေနဲ့
You're in my heart (အသည်းနှလုံးငြိမ်းချမ်းရေး၊ဇော်ဝင်းထွဋ်)၊ Cat Stevensရဲ့သီချင်းကိုပြန်ဆိုထားတဲ့ The First Cut Is the Deepest(စီးကရက်မီးခိုးများ၊ဇော်ဝင်းထွဋ်)Have I Told You Lately That I Love You (ထွဏ်းထွဏ်း)Downtown Train (ရင်ဂို-ဘဝရထား) Passion (ဇော်ဝင်းထွဋ်-ချစ်ရမက်) တို့လို သီချင်းတွေ ကလဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာဓါတ်ပြားသန်း၁၀၀ကျော်ရောင်းရတာကြောင့် best selling artists of all time စာရင်းဝင်လဲဖြစ်ပါတယ်။ ( အရောင်းရ ဆုံးသန်း၃၀၀ကျော်တဲ့ သူစာရင်း ကတော့ The Beatles၊ Presly ၊ Michael Jackson ၊ Madonna၊ Elton John ၊ Led Zeppelin၊ Queen နဲ့ ABBA တို့ဖြစ်ပါတယ်။) သူ့ရဲ့နာမည်ကျော်သီချင်း၆၂ပုဒ်လောက်ကို မြန်မာပြန် မဆိုထားတဲ့ သီချင်းရယ် လို့တော်တော် ရှားတယ်။
၂၀၀၀ခုနှစ်မှာပုံမှန်ဆေးစစ်ရင်းသိုင်းရွိူက်ကင်ဆာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ခွဲစိပ်ကုသခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအတွက် သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော် အသံထိခိုက်ခဲ့သလို သီချင်းဆိုဖို့ပြန်ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။ ကင်ဆာဖြစ်ပြီးကတည်းကသူဟာ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်လှူပ်ရှားခဲ့ပါတော့တယ်။ သူ့ရဲ့ The Very Best Of Rod Stewart ကတော့ကျနော်ထာဝရသိမ်းထားမိတဲ့အခွေပါပဲ။
ရုရှားနိုင်ငံသည် လိင်တူချစ်သူများအား ဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေတစ်ရပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းထားရာ လိင်တူချစ်သူများကို အားပေးရပ်တည်သည့် ဆယ်လီနာကို ယခုလို ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ခဲ့ခြင်းဟု သိရှိရရုရှားတွင်ပြုလုပ်မည့် ဖျော်ဖြေပွဲအစီအစဉ်တစ်ခုတွင် ပါဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေသော ဆယ်လီနာဂိုမက်ဇ်ကို ရုရှားအစိုးရက ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်သည်။ ယခင်က ကွန်မြူနစ်စနစ် ကြီးမားစွာ ဩဇာလွှမ်းမိုးခဲ့သည့် ရုရှားနိုင်ငံသည် လိင်တူချစ်သူများအား ဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေတစ်ရပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းထားရာ လိင်တူချစ်သူများကို အားပေးရပ်တည်သည့် ဆယ်လီနာကို ယခုလို ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ခဲ့ခြင်းဟု သိရှိရသည်။ ဆယ်လီနာအနေဖြင့် ရုရှားတွင် ဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ်စဉ် Gay အခွင့်အရေးအတွက် စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်မည်ကို အစိုးရက စိတ်ပူနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းက Come And Get It စတား အဆိုတော်မင်းသမီးသည် Stars Dance ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေပွဲကို မော်စကိုနှင့် စိန့်ပီတာစဘာ့ဂ်တို့တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားခဲ့သည်။
Gay အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Change.org ကို ထူထောင်သူဖြစ်သည့် ဂျွန်ဘက်ကာသည် ဆယ်လီနာ၏ ဖျော်ဖြေပွဲ အစီအစဉ်တွင် Gay များအတွက် ထောက်ခံစကားပြောရန် ပန်ကြား ခဲ့သည့်နောက် ရုရှား အစိုးရက ယင်းအစီအစဉ်အတွက် ကြိုတင် ကာကွယ် တားမြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘက်ကာ က "ဆယ်လီနာရဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကို ပယ်ချလိုက်တာဟာ ဒီကိစ္စမှာ ရုရှားအစိုးရက အရမ်းကို အထိမခံဖြစ်နေ တာ သိသာစေပါတယ်။ သူတို့က ဆယ်လီနာလို ကြယ်ပွင့်တစ်ယောက်က Gay အခွင့်အရေး အတွက် လှုံ့ဆော် စကားပြောမှာမျိုးကို ကြောက်နေတာပါ" ဟုဝေဖန်ခဲ့သည်။ ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူ တင်သည် ဇွန်လက နိုင်ငံအတွင်း ရိုးရာအစဉ်အလာ သဘာဝနှင့် မကိုက်ညီသည့် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုတိုင်းအတွက် ဝါဒဖြန့်မှု၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတို့ကို တားမြစ်သော ဥပဒေ တစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုထားခဲ့သည်။
လူ့လောကရဲ့ အိမ်ထောင်သားမွေးကိစ္စတွေမှာ ရဟန်းတော်တွေနဲ့ သက်ဆိုင် / မဆိုင်
Question: သံဃာတော်တွေ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေပေါ့နော်။ အဲ့ဒီမှာ မေးချင်တာက သံဃာတော်တွေနဲ့ အိမ်ထောင်သားမွေးကိစ္စ သာသနာရေးနဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ်
Answer: ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ ယူဆချက်ဟာ အမှားကြီးမှားတယ်လို့ ဖြေရလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့ မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ သတ္တလောက၊ သြကာသလောက၊ သင်္ခါရလောကရယ်လို့ လောက သုံးပါးကောင်း ကျိုး လို လားတဲ့အတွက် ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတာ။ ဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်တိုင် ကလည်း လောကီလောကုတ်နှစ်မျိုးရဲ့ အကျိုးတရားကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ ကျင့်ကြံဟောပြောခဲ့သလို သူ့ရဲ့ တပည့်သားတွေကို လည်း အဲ့ဒီလိုပဲ ဟောပြောခဲ့တယ်။ အများစုက မကွဲမပြားဖြစ်နေကြတာက လူတွေက လောကီ အလုပ် ကို လုပ်ရမယ်။ ရဟန်းတွေက လောကုတ္တရာအလုပ်ကို လုပ်ရမယ် ဒီလိုပဲ သတ်မှတ် ထားကြတာ။ တကယ်က အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး။ လူ၊ လူရဟန်း၊ ရဟန်း လောကီလောကုတ် နှစ်လီသော အကျိုး တရားကောင်းဖို့ လောကီအလုပ်လုပ်ရမယ်။ ဟောပြောညွှန်ပြတာဟာ ရဟန်းတွေအလုပ်ပဲလေ။ သံသရာကောင်း ဖို့အတွက် လောကုတ္တရာလုပ်ရမယ် ဒီလိုပဲ အကြမ်းမှတ်ထားရမယ်။ လောကီကောင်းကျိုးတွေ မပြောမလုပ်ပဲ လောကုတ္တရာ တစ်ခုတည်းလုပ်နေရင် ဆီမဖြည့်ပဲ ရထားမောင်းသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
Q : ဒါဆိုလူနဲ့ရဟန်းဘာကွာလို့လဲ အတူတူဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ လောကီကိစ္စတွေနဲ့ ရဟန်းတော်တွေနဲ့ ဆိုင်တယ် ဆိုရင် အချို့ကျမ်းဂန်တွေမှာ ရဟန်းတွေနဲ့ လောကီရေးရာ မဆိုင်ဘူးလို့ တွင်တွင် ဆုံးမထားတာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
A : လူနဲ့ရဟန်း အကွာကြီးကွာတာပေါ့။ မနှိုင်းယှဉ်အပ် မနှိုင်းယှဉ်သာအောင် ကွာခြားပါတယ်။ ဒီလိုမေး တာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အတွင်းကျကျမလေ့လာဘဲ မိရိုးဖလာတွေ များနေကြလို့ပါ။ တကယ်တမ်း ဗုဒ္ဓကျမ်းစာတွေ အတွင်းကျကျ လေ့လာဖူးတဲ့သူတွေက သူ့နေရာနဲ့သူ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ် သိတတ်ကြ တယ်။ ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတာရားတော်ဟာ လောကီလောကုတ်နှစ်လီသော ကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်အောင် ညွှန်ပြတယ်ဆိုတာ လူတွေခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်။ ကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကိစ္စ ပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းညွှန်ပေးရမယ်။ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့ထဲမှာ ပဋိသန္ဓေကိစ္စ၊ မိန်းကလေးဓမ္မတာ ကိစ္စ၊ ဆေးနည်း စတာတွေ အကုန်လမ်းညွှန်ချက်တွေ ဖြစ်ပျက်ပုံတွေအထိဟောခဲ့တယ်။ ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမဲ့အရာတွေမို့ပါ။ မကောင်းကျိုးဖြစ်စေမဲ့အရာဆို ဘယ်လိုသြဇာရှိသူက အမိန့်ပေးထားပေးထား တားမြစ်ရမယ်။ ရဟန်းနဲ့လောကီရေးရာ ဘာမှမဆိုင်ဆိုတာက မကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ လောကီရေးရာမျိုးတွေပါ။ ဗေဒင်၊အင်းအိုင်၊ ဂိုဏ်းဆရာ၊ နတ်ဆရာ၊ ဂမ္ဘီရကိစ္စမျိုးတွေ မလုပ်ရဘူး။ မဟောရဘူး။ အိမ်ထောင်မပြုရဘူး။ မူးယစ်သေစာမမှီဝဲရဘူး။ မွန်းလွဲစွာ မစားရဘူး။ ကတာ၊ဆိုတာ၊တီးမှုတ်တာ၊နံ့သာလိမ်းတာတွေ မလုပ်ရဘူးစတာပေါ့။ မဆိုင်တဲ့ လောကီအလုပ်တွေမှအများကြီးပဲ။ အဲ့ဒါမျိုးတွေထဲလုပ်လို့ တွေ့ရင် သာသနာညှိုးနွမ်းစေမှုနဲ့ တရားစွဲလုိ့ရတယ်။ အဲ့ဒီအချက်တွေက လူတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်တွေပါ။ သူတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့လောကီရေးရာတွေပါ။ သူတို့မှာထိန်းသိမ်းရတဲ့ သိက္ခာပုဒ်ပေါင်း ကုဋေကိုးထောင်ကျော်ရှိတယ်ဆိုရင် လူတွေနဲ့မတူအချက်တွေလည်း ကုဋေကိုးထောင်မကရှိလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ လောကီရေးရာတွေပါတယ်။ ခုသံဃာတော်တွေ လုပ်နေတာက လောကီကောင်းကျိုးတွေလုပ်နေတာ။ ဆိုင်လုိ့ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတွေကိုမှီပြီး လုပ်နေတာမို့လုပ်သင့်ပါတယ်။
Q : ဒါဆိုဘုရားဟောခဲ့တဲ့ လောကီကိစ္စတွေကိုပြောပြပေးပါလား။
A : အကုန်ပြောပါဆိုရင်တော့ မိုးသာလင်းသွားလိမ့်မယ် ပြောပြလို့ကုန်မယ်မထင်ဘူး။ ပိဋိကတ်သုံးပုံကို တစ်ခုချင်းဆီ မြန်မာလို့ ဘာသာပြန်ရင် စည်းကမ်း၊နည်းလမ်း၊ သဘောတရားလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ အဲဒီမှာ လောကီရော လောကုတ်အတွက်ပါ ကျင့်ကြံလုပ်ကိုင်နေထိုင်ရမယ့် စည်းကမ်းနည်းလမ်းနဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ သဘောတရားတွေကိုပြထားတယ်။ မပါတဲ့အရာမရှိသလောက်ပဲ။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာသိပ္ပံပညာရှင်တွေ တစ်ခုခုတွေ့တယ်၊ စမ်းသပ်ခန့်မှန်းချက်ထုတ်တယ်ဆိုရင် များသောအားဖြင့် ဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာသဘောတရားတွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေတာကို အံ့သြစွာတွေ့နေရတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတောင် စီးပွားရေးလုပ်ရမဲ့ နည်းလမ်းတွေကို မြတ်ဗုဒ္ဓပိဋကတ်တွေထဲမှာရှာပြီး လုပ်ကြည့်ရင်တိုးတက်လာနိုင်တယ်။ အကုန်သိချင်ရင်တော့ ပိဋကတ်တွေကို သေချာလေ့လာမှရမယ်။
Q : ဘာဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်သားမွေးကိစ္စနဲ့တော့ လုံးဝမဆိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
A : ဒါဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေထဲက ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ထင်သာမြင်သာအောင် နည်းနည်းပြောပြပေးမယ်။ ပရိတ်ကြီး ၁၁သုတ်ထဲက အင်္ဂုလိမာလသုတ်ဟာ ကလေးမွေးမရလို့ ဟောခဲ့တဲ့သုတ်ပါ။ နောက်မီးဘေးကင်းဖို့၊ အချုပ်အနှောင်ကလွတ်မြောက်ဖို့၊ ရောဂါတွေကင်းရှင်းဖို့ ဟောခဲ့တဲ့သုတ်တွေချည်းပဲ။ အဲ့ဒါလောကီအတွက်လုပ်ပေးတာ မဟုတ်ဘူးလား။ အာဝါဟ ၀ိဝါဟမင်္ဂလာဆိုတာတွေ လင်ကျင့်ဝတ်၊မယားကျင့်ဝတ်တွေ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပါတ်သက်တာတွေ အများကြီးဟောခဲ့သလို အခြားအကြောင်းအရာတွေအတွက်လည်း အများကြီးဟောခဲ့တယ်။ စပ်မိလို့ တစ်ဆက်တည်းပြောပြဦးမယ်။ အကြီးအကဲတွေလိုက်နာရမဲ့ နာယကဂုဏ်ခြောက်ပါးဆိုတာ ပညာရှင်တွေရေးခဲ့တဲ့ စည်းကမ်းမဟုတ်ဘူး။ သိင်္ဂါလောဝါဒသုတ်လာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေပါ။ အဲ့ဒီသုတ်မှာဆိုရင် မိဘ၀တ်၊သားသမီးဝတ်၊ဆရာဝတ်၊တပည့်ဝတ်၊မိတ်ဆွေဝတ်တွေအပြင် လောင်းကစားခြင်းအပြစ်၊ မူးယစ်သေစာမှီဝဲခြင်းအပြစ်၊ ပျင်းရိခြင်းအပြစ်တွေပါ အစုံပါအောင် ဟောထားတယ်။ ဒီကျင့်ဝတ်တွေ ကျောင်းနေသူတိုင်းသင်ဖူးတယ်။ တကယ်လို့သာ အိမ်ထောင်မွေးကိစ္စသံဃာတော်တွေဘက်က လမ်းညွှန်ဖို့မဆိုင်ဘူး။ လောကီအလုပ်တွေပါဆိုရင် အကြီးအကဲတွေ လိုက်နာဖို့ လင်နဲ့မယား၊ မိဘနဲ့သားသမီး၊ ဆရာနဲ့တပည့်၊ အရက်သမားလောင်းကစားသမား ပျင်းရိနေကြတဲ့ တေလေသမားတွေအတွက် ကောင်းစေနိုင်တဲ့ တရားတွေကို ညွှန်ပြဟောကြားပေးခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ သံဃာတွေ လုပ်နေတာဟာ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေနဲ့မသွေဖီ တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်တယ်။ အဲဒီထဲမှာအထိရောက်ဆုံးက သားသမီးကျင့်ဝတ်ထဲမှာ စောင့်လေမျိုးနွယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။
Q : ဒါဆိုလောကီကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဟောခဲ့တာတွေ အများသားပါလား။
A : ဒါကြောင့်ပြောရင်မကုန်နိုင်ပြီ ပြောတာပေါ့။ ၃၈ ဖြာမင်္ဂလာတရားကိုပဲကြည့် လောကီကောင်းရေး ဦးစားပေးဟောခဲ့တယ်လို့တောင် ပြောရတယ်။ ဘုရားသာသနာမှာ လောကီကောင်းအောင် အရင်လုပ်ပြီး လောကုတ်ပေါ်ရောက်အောင် ပြင်ဆင်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။ ကားကောင်းမှ ခရီးကြောင်းဖြောင့်မယ်ဆိုတဲ့ အသေ၀နာစဗာလာနံ လူမိုက်ကိုမပေါင်းသင်းခြင်းသည် မင်္ဂလာမည်တယ်လို့ မပေါင်းရမဲ့သူတွေကို တားမြစ်ပေးထားတယ်။ ပဏ္ဍိတာနဉ္စသေ၀နံ - ပညာရှိကိုပဲပေါင်းရမယ်လို့ ညွှန်ကြားပေးထားတယ်။ ပူဇာစ ပူဇနေယျာနံ - ပူဇောထိုက်သူကို ပူဇော်ရမယ်လို့ သွန်သင်ပေးထားတယ်လို့ လူမိုက်လို့ သံသယရှိရင် ညွှန်ပေးရမှာပဲ၊ မင်္ဂလာတရားတွေကြည့်ရင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ဟိုလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ ဒီလူနဲ့ပေါင်းလို့တောင် တိုက်ရိုက်ပြထားသေားတာ ကိုယ့်ဒါယကာ၊ဒါယိကာမတွေ ကောင်းကျိုးအတွက် လမ်းညွှန်ပိုင်ခွင့် ရဟန်းတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ လိုက်နာတာ မလိုက်နာတာတွေ သူတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။ ၀တ္တရားကျေအောင် လမ်းညွှန်တာတော့ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
Q : ဒီလိုဆို အချို့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေနဲ့ သာမန်လူအချို့က ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးတာကို ဘာလို့ကန့်ကွက်နေကြတယ်ထင်လဲ။
A : အရိုးရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာတရား လေ့လာလိုက်စားမှုနည်းလို့ပါ။ အပြစ်လွတ်အောင် ပြောရရင် မသိလို့လုပ်မိတာပေါ့နော်။ ဘာသာသနာအလေးမထား နားမလည်လို့ မျိုးချစ်စိတ်နည်းလို့ အချို့က ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်လို့၊ အချို့ကျတော့ စီးပွားပညာ၊ နိုင်ငံရေးတွေဘက်မှာသာ ပေါက်မြောက်အောင်လိုက်စားပြီး ဘာသာရေးကိုဥပေက္ခာပြုထားပြီး နားမလည်ပါးမလည်ဖြစ်နေလုိ့ သူတို့သိတဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ကို ရှေ့တန်းတင်ပြ ကန့်ကွက်နေကြတာပါ။ သိထားတဲ့ တစ်ထွာတစ်မိုက်နဲ့တော့ ဘာသာရေးမှာ နွားခြေရာကွက်ထဲက ဖားသူငယ်အော်နေသလိုမျိုးပါ။ သူတို့အတွေးမှာ ဘယ်လိုရှိလဲတော့ မပြောတတ်ဘူး။ အချို့က ဒါကိုနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်လို့ထင်နေကြတာ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လှည့်ကွက်လုပ်တယ်ပဲ ထင်နေကြတာ။
Q : ဒါဆိုရင် ဒီဥပဒေကို အတည်ပြုပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားလား။
A : တစ်ဖက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဆီပါပဲ။ ဒါကလွှတ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပါ။ သံဃာတော်တွေမှာ ထောက်ပြခွင့် ညွှန်ကြားခွင့်ပဲရှိတယ်။ အတည်ပြုခွင့်မရှိဘူး။ အတည်ပြုချင်တဲ့သူတွေကလည်း ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေထောက်ပြမှာပဲ။ မပြုစေချင်တဲ့သူတွေကလည်း ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတွေ ဆွဲပြထောက်ပြကြမှာပဲ။ နောက်ဆုံးတော့စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေ အဖြေထွက်လာတာပေါ့။ ထားပါ။ ကျွန်တော်တို့က သံဃာတော်တွေ ဒီလောကကိစ္စနဲ့ ဆိုင်မဆိုင်ကို ဘာသာရေးဘက်က ဆွေးနွေးတာ၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာ မဟုတ်လို့ ကျန်တာပြောဖို့ မသင့်ဘူး။
Q : ဒါကို အချို့က လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်လို့ မြင်ကြတယ်။
A : ကြားရပါတယ်။ အဲဒီလူတွေကို မေးချင်တယ်။ ဒါဆို လမ်းဘေးအမှိုက်မပစ်ရ၊ သေးမပေါက်ရ၊ ကွမ်းတံထွေးရဆိုတာတွေက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာလား။ သူ့သားသမီးလွန်ကျူးလို့၊ ခိုးလို့၊ သတ်လို့ဖမ်းတာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာလား။ အချို့က လူ့အခွင့်အရေးသာ အော်နေကြတာ ကိုယ်လုပ်နေတာက လူဆန်လား၊ မဆန်လား မသိဘူး။ ဒီဥပဒေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် မထိခိုက်စေသလို အခြားဘာသာဝင်တွေကိုလည်း မထိခိုက်စေပါဘူး။ အခြားဘာသာတွေမှာ ဒီလိုဥပဒေရှိတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မရှိဘူး။ ရှိတဲ့ဥပဒေကလည်း ထိရောက်မှုမရှိ အားနည်းတယ်။ ဒီတော့ အမျိုးသမီးတွေ နစ်နာတယ်။ ဒီဥပဒေရှိသင့်တယ်။ ဒီဥပဒေမရှိခဲ့လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတွေက တကယ်ကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရတာပါ။ စည်းမရှိတဲ့ခြံဟာ အန္တရာယ်မျိုးစုံ အလွယ်တကူကျရောက်ဖို့ လွယ်ကူတယ်။ ဒီတော့လုံးဝရှင်းမသွားတောင် အန္တရာယ်ပြုခံရခြင်းနည်းသွားအောင် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုနည်းအောင် ကိုယ့်ခြံကို စည်းကာပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ မယုံလို့စမ်းကြည့်ချင်ရင် တံတိုင်းအကာအရံမရှိတဲ့အိမ်မှာ တံခါးပေါက်တွေဖွင့်ထားပြီးနေကြည့်ပါ။ ရွှေ၊ငွေ၊ပရိဘောဂတွေ ပြောင်စင်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ရွှေ၊ငွေ၊ပရိဘောဂထက် အဖိုးများစွာ ထိုက်တန်လှတဲ့ သမီးကောင်းရတနာလေးတွေ အန္တရာယ်ကင်းဖို့ ကျွန်တော်ကတော့
ဒီမျိုးစောင့်ဥပဒေကို လုံးဝထောက်ခံတယ်လို့ပြောကြားရင်း ဆွေးနွေးမှုကိုနားကြရအောင်။
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ပင်လုံမြို့ နယ်ခွဲ ဟဲနန်း ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကျူပေါ်ရွာ တွင် နေထိုင်သည့် ဒေါ်နန်းယွန်း ၅၇ နှစ် နှင့် မြေးများ ဖြစ်သော မောင်သိန်းဇော် ၈ နှစ် ၊ မမေသူ ၇ နှစ်တို့သည် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် မွန်းလွဲပိုင်း က ကျူပေါ် - ကာဝိရွာသွား လှည်းလမ်းဘေး ရှိ လက်ဖက်ခြံ ၌ လက်ဖက် ခူးစဉ် SSA (ရွက်ဆစ်) အဖွဲ့ ထောင်ထားသည့် တိုက်မိုင်း တစ်လုံးအား မောင်သိန်းဇော် မှ တိုက်မိ ပေါက်ကွဲ ခြင်းကြောင့် ဒေါ်နန်းယွန်း ၊ မောင်သိန်းဇော် နှင့် မမေသူ တို့မှာ မိုင်းစ ထိမှန် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ သဖြင့် ပင်လုံ မြို့နယ်ခွဲ ပြည်သူ့ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်၍ ဆေးဝါး ကုသမှုများ ပြုလုပ် ပေးလျက် ရှိပြီး တပ်မတော် မှ လိုအပ်သည်များ ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ကင်ညာကုန်တိုက် ဓားစာခံအားလုံး လွတ်မြောက်
ကင်ညာနိုင်ငံ နိုင်ရိုဘီမြို့တော်က အဆင်မြင့် ကုန်တိုက်ကြီးထဲမှာ အစ္စလာမ်အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် သမားတွေ ရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံထားရတဲ့ ဓားစာခံတွေ အားလုံး လွတ်မြောက်စေခဲ့ပြီး အခြေအနေကို စစ်တပ် က အပြည့်အဝ ထိန်းထားနိုင်လိုက်ပြီလို့ ကင်ညာအရာရှိတွေက ပြောကြားပါတယ်။ စစ်သားတွေကတော့ အဆိုပါ WestGate ကုန်တိုက်ကြီးထဲမှာ တထပ်ပြီးတထပ် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုမာလီနိုင်ငံက အယ်လ်-ရှာဘတ် အကြမ်းဖက်သမားတွေကနေ လူစည်းကားတဲ့ ဒီအဆောက်အဦးကို တနင်္ဂနွေနေ့ က သူတို့စီးနင်းခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သေနတ်သမားတွေဟာ ဈေးဆိုင် တဆိုင်ပြီး တဆိုင် ဝင်ရောက်ပြီး ဈေးဝယ်သူတွေကို ပစ်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ချက်ပြုတ်နည်း သင်တန်းတက်နေတဲ့ ကလေး သူငယ် တစုကိုလည်း ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး ကားရပ်နားတဲ့ နေရာမှာလည်း လူတချို့ကို ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြက်ခြေနီရဲ့ စာရင်းအရ သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၆၉ ဦး ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုမာလီနိုင်ငံတွင်းမှာ ကင်ညာစစ်တပ် ဝင်ရောက် စွက်ဖက်နေမှုကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုတာကို ကင်ညာ အစိုးရ မလိုက်လျောတဲ့အတွက် အခုလို တိုက်ခိုက်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ အယ်လ်-ရှာဘတ် အကြမ်း ဖက် အဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက ကင်ညာသမ္မတ Uhuru Kenyatta ကို တိုက် ရိုက် ဆက်သွယ် ပြောကြားခဲ့ပြီး တရားဥပဒေ ထိန်းသိမ်းရေး အကူညီတွေ ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်
ပြည်တွင်းဂျာနယ် တစ်စောင်နှင့် ပြည်ပမီဒီယာ အချို့တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ၁၁ ဘီလျံတွင် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၏ ငွေစာရင်း ပါဝင်ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ် ဆိုသော သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ The Daily Eleven သတင်းစာမှ မေးမြန်းချက်အပေါ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်မှတစ်ဆင့် ရှင်းလင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။
သံတော်ဆင့် ဂျာနယ်တွင် ၁၁ ဘီလျံတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၏ ငွေစာရင်း ပါဝင်ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ် ဆိုသော သတင်းပါဝင်ပြီး နောက်ပိုင်း ပြည်ပမီဒီယာ အချို့မှလည်း အဆိုပါ သတင်း များကို ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့်အပေါ် အများပြည်သူ သိရှိလိုသည့် အတွက် အခြေပြုကာ ထပ်မံမေး မြန်း ခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းမှာ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ အားထားရသော ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးတစ်ဦး ဖြစ်နေပြီး တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးများစွာ ပြုနိုင်သည့် နေရာတွင် ရောက်ရှိနေခြင်း၊ အရေး ပါသည့် နေရာတွင် ရှိနေ၍ ပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး အဖြစ်လည်း ရှိနေသူ ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ အရေးပါသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်နေသည့်အတွက် အများပြည်သူကြား၌ ၁၁ ဘီလျံတွင် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၏ ငွေစာရင်း ပါဝင်ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ် ဟူသော သတင်းကို ရှင်းလင်း စွာ သိရှိစေရန် The Daily Eleven သတင်းစာမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းအပြင် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး၏ မိသားစု ရင်းချာများပါ နိုင်ငံခြား ဘဏ်စာရင်းများဖြင့် ရှင်းလင်းမှု ရှိ၊ မရှိကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်မှတစ်ဆင့် မေးမြန်းခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
The Daily Eleven မှ မေးမြန်းရာ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းတွင် ပြည်ပ၌ နေထိုင်သူ သားသမီးများ ရှိသည်မှာ ဟုတ်မဟုတ်၊ ၀န်ကြီးသားသမီးများ အနေဖြင့် ဒေါ်လာပမာဏ အမြောက်အများကို ယူဆောင် လာပြီး စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာမည် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရောက်ရှိ နေသည် ဆိုသော သတင်းမှာ ဟုတ်၊ မဟုတ်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း အနေဖြင့် မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ကြွယ်ဝ ချမ်း သာခြင်း ဟုတ်၊ မဟုတ်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း အမည်ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ သားသမီးများ အမည်ဖြင့် သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးရင်းချာ အမည်ဖြင့် ဒေါ်လာပမာဏ များပြားစွာရှိသော နိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာရင်းများ ရှိ၊ မရှိ စသည်ဖြင့် ပြည်သူကြားတွင် သိရှိလိုနေသော မေးခွန်းအချို့ကို သိခွင့်ရှိလျှင် သိလိုကြောင်း၊ ရေးခွင့်ရှိလျှင် ရေးလိုကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကလေးများ အနေနဲ့ ဖခင်ရဲ့ ရာထူး၊ တာဝန်ကို အသုံးပြုပြီး ငွေကြေး၊ အခွင့်အရေး ရယူခြင်း မရှိပါဘူး။ သူတို့ပညာနဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင် ၀င်ငွေရှာဖွေ ရပ်တည်နေတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ နေထိုင်သူတိုင်း ဘဏ်စာရင်းတော့ ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ ၀န်ကြီး ဦးစိုးသိန်းကလည်း သူ့သားသမီးများ အနေနဲ့ ဖခင်ရဲ့ အရှိန်အ၀ါကိုသုံးပြီး ငွေကြေး အမြောက်အများကို နိုင်ငံခြား ဘဏ်စာရင်းတွေ ဖွင့်ထားတယ် ဆိုတာ သက်သေ အခိုင်အမာ ရှိရင်ပြောပါ။ သူ့ကိုအရေးယူ နိုင်ပါတယ်လို့...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းမှာ ယခင်အစိုးရ လက်ထက်က ငွေကြေးဆိုင်ရာများ စီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်း များတွင် ပတ်သက် ဆောင်ရွက်မှု များပြားခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူ ခဲ့ပြီးနောက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ မြေကွက်နှင့် အဆောက်အဦများအား ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း ပြုလုပ်မှုများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပေးနိုင် သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်တွင် ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကိုလည်း ထမ်းဆောင်ခွင့် ရရှိ ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းပေါင်း များစွာကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း၊
ထိုသို့ ခွင့်ပြုပေးရာတွင် စီးကရက်၊ ဘီယာ၊ အဖျော်ယမကာ စက်ရုံများစွာကို လုပ်ကိုင်ခွင့် ချထားပေး ခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် စက်မှုဝန်ကြီး ဌာနအဖြစ် ပေါင်းစည်းခြင်း မပြုခင်မှ ပေါင်းစည်းပြီး ယနေ့ အထိ ၎င်းအပါအ၀င် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လေးဦးအထိ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ စက်မှု ၀န်ကြီး ဌာန ၀န်ကြီးအဖြစ် ၎င်းတာဝန် မယူတော့သည့် နောက်ပိုင်းတွင် ၀န်ကြီးနှစ်ဦး အပြောင်း အလဲ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတလက်ထက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အများအပြားနှင့် ရင်းနှီးသူ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို သို့သော အကြောင်းများကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ၀န်ကြီးဦးစိုးသိန်းအပေါ် စွပ်စွဲချက် ထွက်ပေါ် လာခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မှုများရှိသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ ဘာလင်မြို့ အခြေဆိုက် Chaos Computer Club (CCC) လို့အမည်ရတဲ့ ဟက်ကာအဖွဲ့ဟာ iPhone 5S နဲ့ Touch ID fingerprint Scanner ကို အလွယ်တကူ ဖောက်ထွင်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖောက်တယ်ဆိုလို့ ဝက်အူရစ်၊မူလီတို့နဲ့ ဖောက်တာ ကို ပြောတာမဟုတ် ပါဘူး။ လက်ဗွေ အတုနဲ့ ဖုန်း လုံခြုံရေး စနစ်ကို ကျော်ဖြတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ရှင်းပြထားချက်က ဒီလိုပါ။ iPhone 5S မှာ ထူးခြားသွားတဲ့ လုံခြုံရေး စနစ်က အရည်အသွေးပိုကောင်းတဲ့ High resoulution ဓာတ်ပုံ ကိုရိုက်ကူး သိမ်းဆည်းထားခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ယင်းကဲ့သို့ အလားတူ ဓာတ်ပုံကို ဖန်တီးနိုင်ရင် အလွယ်တကူ ဖောက်ဝင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူရဲ့  လက်ဗွေ မူရင်းကို ၂၄၀၀ dpi အရည်အသွေး ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ ပြီးရင် ယင်းလက်ဗွေကို Laser printer နဲ့ 1200 dpi အထိ အနိမ့်ဆုံးအရည် အသွေးနဲ့ ပြန်လည်ထုတ်လိုက်နိုင်ရင် iPhone 5S ပေါ်မှာ အသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ။
လေဆာနဲ့ Print လုပ်ထား တဲ့ ယင်း လက်ဗွေ အခွံကို လက်ထိပ်မှာကပ်ပြီး ဖိဖွင့်လိုက်ရုံပဲ ဖြစ်ပါတယယ်။ ပိုပြီး ရှင်းလင်း သွားအောင် အောက်ပါ ဗီဒီယိုကို လေ့လာကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။
ဒီအတွက် ဆုချဖို့ ကြေညာထားတဲ့ ဟက်ကာအဖွဲ့အစည်းများ ကို ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်နေပါပြီ။ တကယ်မှန်တယ်ဆိုရင် ဆုကြေးငွေ အတော်လေးရမယ့် ဖောက်ထွင်းမှုကြီးပါ။ Apple ရဲ့  iPhone 5S ကို ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချတဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ Hack လုပ်နိုင်ကြောင်း Claim လုပ်ကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ Individual တွေ များနေပါပြီ။ Apple က ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ပြောဆိုမယ် ဆိုတာကိုလည်း စောင့်ဆိုင်းနားစွင့်လျက် ရှိကြကြောင်း သိရပါတယ်။.Ref:mashable
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ GMG ကုမ္ပဏီတွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သော နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက်ပုလင်း ၉၀၀၀၀ နီးပါးနှင့် ပတ်သက်ပြီး နေပြည်တော် ရုံးချုပ်သို့ ၂၄ နာရီအတွင်း အစီရင်ခံစာ ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း Mobile Team မှ သိရသည်။
GMG ကုမ္ပဏီကို စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်မှစ၍ ၂၁ ရက်အထိ လေးရက်ကြာ ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့စဉ် ဒုတိယရက်တွင် စစ်ဆေးခဲ့သော ဂိုဒေါင်များ၏ ခြောက်လုံးမြောက်တွင် Tiger တံဆပ်ပါ ပုလင်းအလုံး ၆၀၊ ပုလင်းပြားမှာ ၃၈၂၉၆ ပြားနှင့် Bonus Weseky အမည်ဖြင့် ပုလင်း ၂၀ ကျော်ခန့်တို့ စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ တတိယရက်တွင်လည်း ကားပစ္စည်း ထားရှိသော ဂိုဒေါင်အတွင်း Tiger တံဆပ်ပါ ပုလင်းအလုံး ၅၁၀၀၀ နီးပါး ထပ်မံတွေ့ရှိ ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ရှာဖွေခဲ့ရခြင်းမှာ အိမ်သုတ်ဆေး၊ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းနှင့် ပိုက်များအား အဓိကထား တင်သွင်းဖြန့်ဖြူး နေသည်ဟု ဆိုထားသော ဦးလင်အင်ဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် GMG ကုမ္ပဏီမှာ အရက်နှင့် ဘီယာများ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူး နေသည်ဟု စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်က သတင်းပေးပို့မှု တစ်ခုရရှိပြီး နောက်တွင် Mobile Team အဖွဲ့မှ ၀င်ရောက်ရှာဖွေရန် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခန့်မှစ၍ ယင်းစက်ရုံသို့ သွားရောက် ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် အရက်ပုလင်းများနှင့် ပတ်သက်ကာ ကုမ္ပဏီအား အထောက်အထားများ တောင်းခံထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအပြင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း နေပြည်တော်ရှိ Mobile Team အဖွဲ့ရုံးချုပ်မှ အကြီးအကဲများထံသို့ တင်ပြပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွင် ဦးဆောင်သူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ယင်းစစ်ဆေးမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သည့် ဦးတင်ရဲဝင်းက ''ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာတော့ ဒီစစ်ဆေးချက်တွေကို အကြာကြီးထားလို့ မရဘူး။ ၂၄ နာရီအတွင်း အထက် အကြီးအကဲတွေကို တင်ပြပေးသွားရမှာပါ။ ပြီးမှ သူတို့ဆီကလာတဲ့ အဖြေပေါ်ကိုစောင့်ပြီး ဆက်လုပ်စရာတွေကို လုပ်ရမှာပါ။ ဒီစစ်ဆေးချက်မှာဆိုလည်း ကျွန်တော်တို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကိုပါ ထည့်ပေးသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ပြောကြားသည်။
GMG ကုမ္ပဏီသို့ ၀င်ရောက်စစ်ဆေး ခွင့်ရရန် ကြန့်ကြာမှုများ ရှိခဲ့သည့်အပြင် တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ထံသို့ ၀င်ရောက် ရှာဖွေခွင့်ရရန်အထိ လျှောက်ထားခဲ့ရမှုများ ရှိခဲ့သည်။
ယင်းအရက် ပုလင်းများမှာ မိမိတို့ တင်သွင်းခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သောနှစ် ၂၀ ခန့် ကတည်းက အရက်ပုလင်းများအား ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ လာရောက် အပ်နှံထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း GMG ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူထံမှ သိရသည်။
Mobile Team မှ GMG ကုမ္ပဏီတွင် တွေ့ရှိခဲ့သော အရက်ပုလင်းများအား စစ်ဆေးနေစဉ်
Facebook Official မှာ တိုးလာသော ကြော်ငြာစနစ်
Facebook က ဒီနောက်ပိုင်း အရမ်း စီးပွားရေး လုပ်လာတယ်။ ပို့စ်တစ်ခု တင်လိုက်တာနဲ့ ကြော်ငြာမလား ဆိုပြီးတော့ Pop up box လေးတွေပေါ်လာပြီ။ အရင်ကဆိုရင် Facebook ဖို့ Official ကြော်ငြာ ထည့်ဖုိ့ အတွက် Admin Setting ထဲကနေဝင်ရတာပါ။ ယခုလို ပြောင်းလဲလာတာကလည်း နည်းနည်းတော့ ကြာ ပါပြီ။
ဒီတော့ Facebook ရဲ့  ဝင်ငွေလည်း သိသိသာသာကို မြင့်တက်လာနေပါတယ်။ Product and Service ကုမ္မဏီများက ၎င်းတို့ ကုန်ပစ္စည်းကို လူအများပိုသိစေဖို့၊ မြင်စေဖို့အတွက် Facebook မှာ Official ကြော်ငြာထည့်တာမျိုးတွေလုပ်လာ ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း လုပ်ကြပါတယ်။ Facebook Authorized Adv အေးဂျင့်တွေ ရှိနေပါပြီ။ Facebook မှာ ကြော်ငြာထည့်ရင် သူက ဘာလုပ်ပေးလဲ ဆိုတော့ - right side column ထဲမှာ ထည့်ပေးပါတယ်။ ယခု ဒီစာကို New Tab မှာ ဖတ်နေတယ်ဆိုရင် ဘေးညာ မှာ ကြော်ငြာတွေကို မြင်တွေ့နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sponsered ဆိုတဲ့ title နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
Post တစ်ခုချင်းစီကို ကြော်ငြာတာနဲ့ Page တစ်ခုလုံးကို ကြော်ငြာတဲ့ Option ၂ ခု ပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ငွေပေးချေမှုကလည်း ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကနေစတယ်ထင်ပါတယ်။ သူက ၁ ဒေါ်လာကို 1 like အနည်းဆုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့ အာမခံထားပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒေါ်လာ ၁၀၀ သွင်းတဲ့ အသိ Page တစ်ခုဆိုရင် Like တစ်ထောင်ကျော်ကို တစ်ပတ်အတွင်းရသွားတာကို ကိုယ်တွေ့ မြင်ရပါတယ်။ စစ်ကြည့် လိုက်တော့လည်း Fake မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ် Real account တွေပါ။
သူက ကြော်ငြာဖို့အတွက် People မှာ Male/Female. Friends /Public. အသက်မှာဆိုရင် under 18 နဲ့ above 18. Region မှာကျ ကိုယ် Target ထားပြီး ကြော်ငြာထည့်ချင်တဲ့ နိုင်ငံ အစရှိသဖြင့် ရွေးစရာ Option အစုံအလင် ပေးထားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ အဲ့လို ကြော်ငြာလိုက်ရင် Facebook က Customer ရွေးချယ်ထားတဲ့ Option အတိုင်း Post တွေကို Spread လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖိုး၊ ၂၀၀ ဖိုး၊ ၃၀၀ ဖိုးအလျောက် အချိန်ကာ နဲ့ ကြော်ငြာအရေအတွက် random ခွဲခြားထားပုံ မတူသေးပါဘူး။
နောက်ဆိုရင် Facebook က အဲ့ဒီ စီးပွားရေးကို ပိုမိုပြီး ချဲ့ ထွင်လုပ်ကြတော့မှာပါ။ Page တွေရဲ့ News Feed ကို Like/ Subscribe လုပ်ထားသူတွေရဲ့  Wall မှာ ပေါ်လွင်စေမှုက အရင်ကလောက် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်တော့ပဲ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်နဲ့ကို News Feed မှာ ဖော်ပြပေးတာတွေ လျော့လာပါတယ်။ ငွေသွင်းပြီး adv plan လုပ်တဲ့ page တွေကိုပဲ News Feed မှာ ပေါ်စေမယ့် စီးပွားရေး တစ်မျိုးလည်း Facebook တို့ စတင်နေပါပြီ။
ဒီတော့ လူတိုင်း ဗဟုသုတ အဖြစ် သိရအောင် ရေးသားမျှဝေလိုက်ရ ပါတယ်။
ဟုန်ရှင်း အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်များကို ဆက်လက်တရားစွ...
21.9.2013 ရက်စွဲဖြင့် တင်ခဲ့သော “မိတ္ထီလာမှာ ကုလား ...
ပါကစ္စတန်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း အသေခံဗုံးခွဲ တိုက်ခို...
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ ဆေးစာများ - Primolut N အ...
Apple ထုတ်ကုန်များကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းပေးတော...
အိမ်ထောင်ရေးကို အဖတ်ဆည်ရန် မျှော်လင့်ဆဲဟု မိုက်ကယ်...
လူ့လောကရဲ့ အိမ်ထောင်သားမွေးကိစ္စတွေမှာ ရဟန်းတော်တွေ...
SSA (ရွက်ဆစ်) အဖွဲ့ ထောင်ထားသည့် တိုက်မိုင်းတစ်လုံ...
၁၁ ဘီလျံ ငွေစာရင်း ငါးခုတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦး...